June 2013 | ကမ်းလက်
in စာအုပ်အညွှန်း, ဇင်ဝေသော် - on 6/30/2013 - No comments
"စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက တရုတ်လူမျိုးတွေကို ခေါ်ရာမှာ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ မတူကြဘူး"
ကုလားလို့ခေါ်တာ ရိုင်းတယ်၊ မရိုင်းဘူး စတဲ့အညင်းအခုံ အီးမေးတွေ၊ စာတွေ တော်တော်များများ ဖတ်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလို တရုပ်လို့ အခေါ်ခံရတဲ့ တရုပ်မျိုးဆက်တွေဆီက ဘယ်လို အသံမှ မကြားရဘူး။ မကြာရရုံတင်မကဘဲ ဒီလို ဒေသသုံးဝေါဟာရတွေကို တရားဝင်တောင် အသိအမှတ်ပြုထားသလိုပါပဲ။
ကိုလိုနီခေတ်နဲ့ ကိုလိုနီမတိုင်မီခတ်အထိ နိုင်ငံခြားသားတွေကို မြန်မာလိုခေါ်ရာမှာ ဒီ နာ မည်သုံးမျိုးက ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
ဒီနေ့ သတင်းစာမှာ "Tracing the history of Chinese immigrants" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး ပါလာတယ်။ ဒီ ဆောင်းပါးက စင်္ကာပူ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဟောင်း Lee Khoon Choy ပြုစုတဲ့ Golden Dragon Purple Phoenix သမိုင်းစာအုပ်ကို ဖတ်ညွှန်းသဘော ရေးထားတာပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက တရုတ်လူမျိုးတွေကို ခေါ်ရာမှာ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ မတူကြဘူး။
အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနဲ့ စင်္ကာပူမှာ Peranakans
မြန်မာမှာ တရုတ် ကပြား (Tayoke kabya)
ကမ္ဘောဒီးယားမှာ Konkat Cen
ဗီယက်နမ်မှာ Min Huong
လာလိုမှာ Sino-Lao လို့ခေါ်ပြီး
ဘရူးနိုင်းမှာတော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့ဘာသာစကားနဲ့ သူ ဒီလို ခေါ်ဝေါ်ကြတာကို ရိုင်းတယ်လို့ မဆိုနိုင်တော့ ဘူးထင်ပါတယ်။
မြန်မာလို ကုလား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကုလား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရမှာ အင်ဒီးယန်း၊ ဘင်္ဂါလီ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းသားတွေနဲ့ အာဖရိကန်တွေတောင် ပါဝင်ပါတယ်။
တရုတ်တွေကတော့ (Tayoke kabya) လို့ ခေါ်တာကို နာကြပုံမရပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနဲ့ စင်္ကာပူမှာဆိုရင် သူတို့ကိုသူတို့ ပရာနကန်းတွေလို့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့တောင် ပြောတတ်ကြသေးတယ်။
မေ့မရနိုင်တဲ့ အကြောင်း (ကမ်းလက် လပတ်လည်)
in ကမ်းလက် လပတ်လည်, ဇင်ဝေသော် - on 6/28/2013 - No comments
" ဟေ့ ခေါင်တိုင်နဲ့ ဝင်တိုက်မိမယ်၊ သတိထားကြ"
အမှတ်တမဲ့ ဒီစကားကိုပြောလိုက်မိပြီး ဘကြီးအေးက သူ့ပါးစပ်ကိုသူ အသံမဲ့ ကြိမ်ဆဲနေလိုက်မိတယ်။ စိတ်မလုံတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့်ပတ်ကြည့် လိုက်တော့ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမလား၊ ဘယ်သူမှတော့ သူ့စကား အ ဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ကြပုံ မရဘူး။ အေးလေ၊ ဒီ စကားကို အပြည့်အဝ နား လည်ဖို့ဆိုတာကလည်း အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း သိထားအုံးမှကိုး။ ရွာထဲမှာ ရှေ့မှီနောက်မှီလူကြီးတွေလည်း သိပ်မှ မရှိတော့တာကလား။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ရွာသူကြီး ဦးယဉ်ကျေးသေဆုံးပြီ လို့ သတင်းတစ်ခါထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဦးယဉ်ကျေးဆိုပေမဲ့ လူကတော့ ယဉ်ေ ကျးလှပုံမရပါဘူး။ သူတို့ခေတ် မိဘတွေက နာမည်လှလှ အဓိပ္ပါယ်လှလှေ လးတွေ ရွေးပေးတတ်ကြလို့သာ ဒီနာမည်နဲ့ ရှိနေပုံရပါတယ်၊ တကယ်တော့ တစ်ရွာလုံးက သူ့ဆို ရွံကြောက်ကြီးပါ။
သူကြီးဖြစ်စမှာ ဟုတ်မလိုမလိုပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့အကြောင်းကို တစစ သိလာကြရတာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘကြီးအေး အသက် လေးဆယ်ကျော်ကျော်လောက် ရှိဦးမှာပေါ့။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး မှတ် မိနေသေးတယ်။ နောက်တက်လာမယ့် သူကြီးက ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ဦးယဉ်ကျေးသေဆုံးပြီဆိုတော့ ရွာသားတွေကတော့ ပျော်နေကြ တယ်။ သူ့ အသုဘမှာ ဖဲရိုက်၊ သုံးပုံရိုက်ကြဖို့အားလုံး ဟန်ပြင်နေကြလေရဲ့။
ပြဿနာက ( ပြဿနာလို့ပြောရင် ကောင်းမှ ကောင်းပါ့မလား မသိဘူး) သူ့ အခေါင်းကို အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင် ယာယီထန်းလက်တဲထဲကို အထုတ်မှာ စတာ။ သူ့အခေါင်းကို အထုတ်မှာ အခေါင်းနဲ့ ခေါင်တိုင် ဝင်တိုက်မိ ပါလေရော။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ညီးသံလိုလိုကြားလို့ အခေါင်းကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ဦးယဉ်ကျေးက တကယ်သေဆုံးတာမဟုတ်သေးပဲ မြောနေတာဖြစ်တယ် ဆို တာ ရွာသားတွေ သိလိုက်ရတယ်။ ဦးယဉ်ကျေးက အသက်ရှူနေတုံး ပဲ။ ပျော်နေကြတဲ့ ရွာသားတွေ၊ ဖဲရိုက်၊ သုံးပုံရိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ ရွာသားတွေ ဇက် တငန့်ငန့်ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဒါတင် ဘယ်ကမလဲ သေရွာပြန် ရွာသူကြီး ဦးယဉ်ကျေးက ကျန်းမာရေးတွေ တဖြည်းဖြည်းပြန်ကောင်းလာပြီး ရွာကို ဆက်အုပ်ချုပ်လာလိုက် တာ နှစ်ေ ပါင်း ဘယ်နည်းတော့မလဲ။ ပယောဂတွေ ဘာတွေကို ယုံကြည်ကြတဲ့ ရွာသားတွေကတော့ အဲဒါ ဖုတ် ဝင်နေတာ၊ ဦးယဉ်ကျေးအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်။ သူတို့ပြော လည်း ပြောစရာပဲ သေရွာပြန်ဦးယဉ်ကျေးက သူတော်ကောင်းဖြစ်လာရမယ့် အစား ပိုပြီးတောင် လောဘမောဟတွေ အားကြီးလာသေးတယ်။ တချို့ ကတော့ အလောင်းသယ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ သူ့အိမ်က ခေါင်တိုင်ကို ထိုင်ဆဲနေတတ် ကြတယ်။ ဒင်းတို့သာ ဂရုတစိုက်သယ်ယူခဲ့ရင် ဦးယဉ်ကျေးသေနေပြီပေါ့။
သူ တကြော့ပြန် အုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်တွေမှာပဲ ဘုရားပွဲတွေလည်း စည်စည် ကား ကား မကျင်းပနိုင်၊ ရွာဦးက ကန်ရေဆိုလည်း မိုးမကျခင် ရေတွေခန်း၊ ရာသီ ဥတုက မမှန်ရတဲ့အထဲ သူကြီးမွေးထားတဲ့ လူရမ်းကားတွေက စပါးမပေါ်ခင် စပါးလာသိမ်း၊ တစ်ရွာလုံး ဒုက္ခပင်လယ်ဝေရတဲ့ နှစ်တွေပေါ့။ ရွာမှာ အကြီး အကျယ် ချမ်းသာနေကြတာကတော့ ဦးယဉ်ကျေး မိသားစုနဲ့ သူ့တပည့်တွေ အုပ်စုပဲ။ မကျေနပ်ပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ ဒါတွေကို ဘကြီးအေးက ကောင်းကောင်းကြီး သိမီနေတော့ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့။ စိတ်မကောင်းလည်း သူလည်း ဘာမှ တတ်နိုင်တာမဟုတ်းလေ။
အသက်အရွယ်လေးရလာတော့ ရွာထဲက နေ့စဉ်ဒုက္ခတွေကို မမြင်ချင်၊ မကြားချင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ကံဦးကျောင်းနဲ့နီးတဲ့ သရက်ခြံထဲမှာ တဲထိုးပြီးနေလိုက်တော့တယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေ ဟောထားတဲ့အတိုင်း "မမြင်ရရာ ကိလေသာ သူ့ဟာသူ ငြိမ်းသည်၊ မကြားရရာ ကိလေသာ သူ့ဟာသူ ငြိမ်းသည်" ပဲ လုပ်နေလိုက်တော့တယ်။ သရက်ခြံထဲတဲထိုးပြီးနေလိုက်ပေမဲ့ မြေးကလေး ငတွတ်လာတိုင်း ရွာသ တင်း၊ ရပ်သတင်းက ပါပါလာတတ်ပြန်ရော။
ဦးယဉ်ကျေး သူကြီးမဖြစ်ခင် ကဆို ဒီနယ်မှာ ဒီရွာက ထိတ်ထိတ်ကျဲပဲ ဥစ္စာ။ ဘယ်ရွာသားကမှ ဒီရွာသား ကို ထိရဲတာမဟုတ်ဘူး။ အခုများလား တစ်ခု ခုဖြစ်ပြီဆို ခံလိုက်ရပြီ ဒီရွာသား။ ရွာထဲက ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေ ဆို သူများရွာသွားပြီး စာရင်းငှား လုပ်နေရသတဲ့။ ကြားမှ မကြား ဖူးတာ။ ဟိုရွာ၊ ဒီရွာတွေက ပြန်ပြန်လာကြပြီး သူများသူကြီးနဲ့ တို့ သူကြီးကတော့ ကွာပကွာ ဆိုပြီးပြောပြောနေကြတော့ ရွာမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေက ပိုပြီး ရင် ထုမနာ ဖြစ်ကြရတာပေါ့။
တမနက်မှာတော့ မြေးကလေး ငတွတ် အမောတကော ရောက်လာပြီး
"ဘကြီးအေး၊ သူကြီး ဦးယဉ်ကျေး ဆုံးပြီတဲ့"
"ဟေ ဟုတ်လား၊ မင်း ဘယ်လို သိခဲ့တာလဲ"
"သူ့တစ်အိမ်လုံး ငိုနေကြတယ်။ အသုဘကိစ္စ ၊ သက်ပျောက်ဆွမ်းအတွက် ဆရာတော်ပင့်ဖိုကိစ္စ စတာတွေစီစဉ်ရအောင် ဘကြီးအေးကို အခေါ်ခိုင်းလို့ ကျုပ် ပြေးလာခဲ့တာ"
"အေးလေ၊ ဒါဆိုသွားကြမယ်" ဆိုပြီး မြေးလေးနဲ့ အတူ သူကြီးအိမ်ကို သူတို့ တန်းပြီးသွားကြတယ်။ ဘကြီးအေးတို့ သူကြီးအိမ်ရောက်တော့ အလောင်းေ ကာင်ကို ရေချိုး၊ အခေါင်းထဲထည့်၊ အခေါင်းကို သူသေဆုံးတဲ့ ကုဋင်ကနေ အပြင်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေကြချိန်ပေါ့။ ဒါကိုလည်းမြင်ရော ဘကြီးအေးပါးစပ်က ထိန်းချိန်တောင် မရလိုက်ဘဲ
" ဟေ့ ခေါင်တိုင်နဲ့ ဝင်တိုက်မိမယ်၊ သတိထားကြ" လို့
အလောတကြီး အော်လိုက်မိတယ်။ ဒီတခါ ခေါင်တိုင်နဲ့ ဝင်တိုက်မိလို့ အ သက်ပြန်လည်လာလိုကတော့ ရွာသွားတွေအတွက် မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာ ဘကြီးအေးက အသိဆုံး နေမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ဆိုးသွမ်းတဲ့ လူအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သေပါစေလို့တော့ ဆုမတောင်းအပ်ဘူး မဟုတ်လား။
" ဟေ့ ခေါင်တိုင်နဲ့ ဝင်တိုက်မိမယ်၊ သတိထားကြ" ဆိုတော့ ဘာလိုလိုကြီး။
ဖတ်ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုစာလေးတစ်ပုဒ်ကို ခံစားပြီး ရေးထားတာပါ။
ကမ်းလက် လပတ်လည်မှာ ဝတ္ထုတို မတင်ဘူးသေးလို့ ရေးလိုက်မိပါတယ်။
၁၁၁ နှစ် သမိုင်း
in ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 6/27/2013 - No comments
၁။ ပျမ်းမျှလူ့သက်တန်း ၄၇ နှစ်
၂။ ၈ ရာခိုင်နှုံးသောမိသားစုအိမ်မှာသာ တယ်လီဖုန်း ရှိ၊ ဒန်ဗာကနေ နယူးယောက်ခေါ်ရင် သုံးမိနစ် ၁၁ ဒေါ်လာကျ။
၃။ တစ်နိုင်ငံလုံး ကားစီးရေ ၈,၀၀၀ သာရှိပြီး ကားလမ်းကလည်း ၂၃၀ ကီလိုမီတာသာရှိ။
၄။ အမြန်နှုန်းက တစ်နာရီမှာ ၁၆ ကီလိုမီတာသာ မောင်းခွင့်ရှိ။
၅။ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နှစ် လုပ်အားခက ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကနေ ၄၀၀။
၆။ အရည်အချင်းမီ အကောင်တင့် တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နှစ် လုပ်အားခ က ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀၊ သွားဆရာဝန်က ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်က ၁,၅၀၀ ကနေ ၄၀၀၀၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာက ၅,၀၀၀။
၇။ ၉၅ ရာခိုင်နှုံးမိခင်တွေ ကလေးမီးဖွားကြတာက အိမ်မှာပဲ။ ၉၀ ရာခိုင်နှုံး ဆရာဝန်တွေက တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတွေ မဟုတ်ကြ။
၈။ သကြားတစ်ပေါင် ၄ ဆင့်၊ ကြက်ဥတစ်ဒါဇင် ၁၄ ဆင့်၊ ကော်ဖီတစ်ပေါင် ၁၅ ဆင့်။
၉။ အမျိုးသမီးအများစုက တစ်လ တစ်ခါသာ ခေါင်းလျှော်။
၁၀။ လူ အသေအပျောက် အများဆုံးရောဂါတွေက နမိုးနီးယား၊ တုပ်ကွေး၊ တီဘီ၊ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ရောဂါ။
၁၁။ Las Vegas ရဲ့ လူဦးရေက ၃၀။
၁၂။ ဆယ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က စာ မရေးတတ် မဖတ်တတ်။
၁၃။ ၆ ရာခိုင်နှုံးသာ အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေးရှိ။
၁၄။ တစ်နိုင်ငံလုံး လူသတ်မှု ၂၃၀ သာရှိခဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၁၁၁) နှစ်ကမြန်မာ၊ ကိုလိုနီလက်အောက်။
ယနေ့ မြန်မာ၊ စင်္ကာပူမီကိုဖို့ နှစ် နှစ်သာလို။ လျပ်စစ်မီး ရှိရှိ၊ မ ရှိရှိ၊ ကလေးတွေ ထင်းခွေရင်း မွေးမွေး မမွေးမွေး၊ ၂၀၁၅ ဆို စင်္ကာပူကိုမီပြီ။ ဒါပဲ။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 6/26/2013 - No comments
မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာဖောင်ကို ၁၇ နှစ်သား Greg ဖြည့်ထား ပုံလို့ ဆိုပါတယ်၊ အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပညာလည်းရ ပြုံးလည်းပြုံးရပါ တယ်။
1) NAME: Greg Bulmash
2) SEX: Not yet. Still waiting for the right person.
3) EDUCATION: Yes
4) LAST SALARY: Less than I'm worth.
5) MAY WE CONTACT YOUR CURRENT EMPLOYER: If I had one, would I be here?
6) DO YOU HAVE ANY PHYSICAL CONDITION THAT WOULD PROHIBIT YOU FROM LIFTING UP TO 20 kg? Of what?
7) DO YOU HAVE A CAR? I think the most appropriate question here would be, 'Do you haveacar that runs?'
DESIRED POSITION: Company's president or vice president. But seriously, whatever is available. If I were inaposition to be picky, I wouldn't be applying here in the first place.
9) DESIRED SALARY: $185,000ayear, plus stock options and Jodee Rich-style bonus. If that's not possible, make an offer and we can haggle.
10) DO YOU CERTIFY THAT THE ABOVE IS TRUE AND COMPLETE TO THE BEST OF YOUR KNOWLEDGE? Yes, Absolutely.
ကံဆိုးသည့်ရဟန်း သွားလေရာ မီးခိုးလိုက်လို့လာ
in ရပ်သတင်း ရွာသတင်း, သီဟနာဒ - on 6/26/2013 - No comments
ရေးသင့်သည့်ကိစ္စ ဟုတ်သလားတောင် မသိတော့၊ သို့သော် အလှည့် အပြောင်းက ထူးဆန်းလွန်းနေသဖြင့် ရေးလိုက်မိသည်။
သီတင်းသုံးဖော် ရဟန်းတစ်ပါးနှင့် နောက်ပါ တပည့်တချို့ သုံးလလောက်က ကြိုတင်ပြီး ခရီးစဉ်ဆွဲခဲ့ကြသည်။
၂၂ ရက်နေ့ နံနက်စောစော မလေးရှားသွားရန်၊ ထိုမှတဆင့် ၂၄ ရက်နေ့၌ ထိုင်း သို့ ခရီးဆက်ရန်၊ ၂၆ ရက်နေ့ စင်္ကာပူပြန်လာရန်ဖြစ်သည်။
ကံ အလွန်ဆိုးသော ခရီးစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ချေ၏။ ကြည့်ပါလေ။
စင်္ကာပူကို အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးသွားသည့် ဟေ့ဇ် များ ၂၂ ရက်က စ အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာပြီး လေနှင်ရာလိုက်ပါကာ မလေးရှားကို အကြီး အကျယ် ဒုက္ခသွားပေးတော့သည်။
ထို ရဟန်းက ထိုနေ့မှာပင် မလေးရှားကြွလေ၏။
၂၃၊ ၂၄ ရက်နေ့တို့၌ မြူတို့က လေနှင့်အတူ ထိုင်းဖက်သို့ ခရီးဆက်ကူးချိန် ထို ရဟန်းနှင့် နောက်ပါ တပည့်တို့လည်း ထိုင်းသို့ သွားကြလေသည်။
မြူများလည်း အနည်ထိုင်စပြုပြီ၊ ယနေ့ သူတိုအားလုံးလည်း ပြန်ရောက် လာကြပေတော့မည်။
သူတို့ခရီးစဉ်အကြောင်းပြောကြရင်း စိတ်မကောင်းသည့်ကြားက ပြုံးမိကြ ရသေး၏။ မတတ်နိုင်ပြီ။
Labels: ရပ်သတင်း ရွာသတင်း, သီဟနာဒ
တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ ဟူသတတ်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/25/2013 - No comments
"တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း" က ဆိုရိုးစကားဖြစ်ချေ သည်။ ယနေ့ ခေတ်စကားဖြင့် လစ်ဘရယ်ဖြစ်သည်ကို ဆိုခြင်းလား၊ ညှိနှိုင်း လို့ မရသည်ကိုဆိုခြင်းလား ကွဲကွဲပြားပြားတော့ မသိပေ။ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ် ဆန်းကို မဆိုလိုချင်သော်လည်း တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာကိုတော့ဖြင့် တို့ ထိ ကြည့်ချင်သည်။
ဘာသာရေး ပွဲလမ်းများ စတင်ရာ၍ ဩကာသ ကန်တော့ချိုးက စ၍ ညှိနှိုင်း လို့ မရတော့။ ဩကာသကန်တော့ချိုး အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေကြ၏။ သူ့ဟာနဲ့သူ မှန်ကြသည်ချည်းသာ၊ ပြဿနာက နှစ်သံ သုံးသံ ကွဲနေခြင်းသာ ဖြစ်၏။ သာသနာကွယ်မည့် ကိစ္စတော့ မဟုတ်။
ထို့နောက် သံဃာတော်များ ပရိတ်ရွတ်ရာ၌ ဤ ဇာတိရုပ်က တဖန် ပေါ် လာပြန်၏။ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်းသံဃာတော်များ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ရာ၌ မည်မျှ သံဃာများများ တညီတညွတ်ရှိလှသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းသံဃာတို့က အညီညွတ်ဆုံး ဖြစ်သည်၊ တစ်သောင်းရွတ်လည်း တစ်သံထဲ ထွက်၏။ တောင်ပိုင်းထိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းထိုင်း အတူတူဖြစ်သည်။ မေတ္တာစိတ်သာ ပဓာနဟု ဆိုရန်တော့ရှိသည်၊ သို့သော် သံဃာအများကြီး အဖြတ် အရပ် ညီညီ ရွတ်ဖတ်တော်မူကြလျှင် ပို၍ ကြည်ညို ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည်ကို ဇွတ်မငြင်းကြသင့်။ အသံထွက်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့က တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ ဆန်လွန်းလှ၏။
ထို့နောက် ရေစက်ချကြ၏။ အားလုံး ကိုယ့်မူနဲ့ကိုယ် ချကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရေစက်ချ အမျိုးမျိုးဟူသည့် စာအုပ်တွေလည်း ရှိလာရတော့ သည်။ သီရိလင်္ကာတို့က တိုသည်၊ ရှင်းသည်၊ ထိမိသည်၊ ရစက်ချ အမျိုးမျိုး စာအုပ်တွေမလို။ တို၊ ရှင်း၊ ထိမိပေမပေါ့၊ မူရင်းကို ကိုင်လိုက်သည်ကိုး။ မူရင်းဘုရားဟောဖြစ်သည့် တိရောကုဋ္ဋသုတ်လာ "ဣဒံ နော ဉာတီနံ ဟော တု၊ သုခိတာ ဟောန္တု ဉာတယော" ကို ရွတ်လိုက်ကြသည်။
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး မွေးရပ်ရွာရောက်ခိုက် မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဆွေမျိုးများ ကို ရေစက်ချအမျှဝေရာ၌
"ဣဒံ နော ဉာတီနံ ဟောတု၊ သုခိတာ ဟောန္တု ဉာတယော" ကိုသာ တူဖြစ် သူကို ရွတ်ဆိုစေကြောင်း ရှားရှားပါးပါး မှတ်သားလိုက်ရသည်။ ဆရာတော် ကြီး၏ ကြည်ညိုဖွယ်များတွင် ဤသို့ ဘုရားဟောကို နံပါတ်တစ်ထားခြင်းများ ပါဝင်သည်။
ရွတ်ဖတ်သရစ္ဇျာယ်လျှင် အကျိုးများစွာရနိုင်သည့် ဘုရားဟော ဂါထာတော် များ ပိဋကတ်တော်မှာ အလွန်များပြားလှပါလျက် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာများ ပေါ်ပြူ လာဖြစ်နေခြင်းက "တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ" ၏ အစွမ်းကို ပြသလျက် ရှိ သည်။
ထိုထိုသော အကြောင်းတို့ကြောင့် ပရိတ်ရွတ်ရာ၌ပင် အခြားသံဃာများလို ညီညွတ်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ မရွတ်တတ်ကြတော့။ ဖြတ်ချင်ရာ ဖြတ်၊ ရပ်ချင်ရာ ရပ်၏။ မှန် မမှန်က ရွတ်ဖတ်နည်း (စည်းကမ်း) ထက် မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့် အနီး ဆုံးဆရာတော်နှင့်သာ ဆိုင်လေတော့သတည်း။
"တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း" ဟူသတတ်။ ။
in ဇင်ဝေသော်, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/24/2013 - No comments
အနောက်တိုင်း ဂျုတ်တွေထဲမှာ မှင်စာက နေရာတော်တော်ရတယ်။ စပ်မိလို့ တစ်ပုဒ်လောက် ပြောခွင့်ပြုပါ။ လူ သုံးယောက် ရေပတ်လည် ဝိုင်းနေတဲ့ ကျွန်းလေးပေါ်မှာ ပိတ်မိနေတယ်။ မလွတ်မလပ်၊ စားချင်ရာ မစားရ၊ သွားချင် ရာ မသွားရ၊ တွေ့ချင်သူနဲ့ မတွေ့ရပေါ့။ သိကြတဲ့ အတိုင်း ပုလင်းလေးတစ် လုံး မျောပါလာ၊ တစ်ယောက် ပွတ်လိုက်တော့ မှင်စာထွက်လာ။ လိုရာဆုတောင်း လို့ပြော ပေါ့။
ပထမလူက "မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် မနေရ တာကြာနေလို့ အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီး ဇနီး၊ သား သမီးတွေနဲ့အတူ ဒင်းနား စားပွဲမှာ ရောက်နေရပါလို၏" တဲ့။
မှင်စာလေးက ပြည့်စေ ဆိုတော့ သူ ကျွန်းလေးထောင်ကနေ လွတ်သွား တယ်။
ဒုတိယလူက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို မက်တာဆိုတော့ အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး သောက်စားနေရပါလို၏ တဲ့။ ပြည့် စေ ဆိုတော့ သူလည်း ကျွန်းလေးထောင်ကနေ လွတ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက် သွားတယ်။
သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး လွတ်လပ်မှု အရသာကို ကျကျနနခံစားနေချိန် မှာပေါ့........
" ငါ တစ်ယောက်တည်း ကျွန်းလေးပေါ်နေရတာ ပျင်းတယ်။ အဖော်ရေ အာင် စောစောက ထွက်သွားတဲ့ လူနှစ်ယောက် ဒီကျွန်းပေါ် ပြန်ရောက်စေ" တဲ့။
မှင်စာလေးကလည်း " ပြည့်စေ" တဲ့။ သွားကရော။
ဘာမှ မကြာလိုက်ဘူး၊ တတိယ ငနဲ လက်ချက်ကြောင့် ဟိုလူနှစ်ယောက် ကျွန်းပေါ်ပြန်ရောက်လာရပြီ။
ကျနော်တို့ အခြေအနေနဲ့ တတိယ ငနဲရဲ့ ဆုတောင်း။
လူကြီးမင်းတို့ ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ။
ဒီလိုသာဆို အားလုံး ကျွန်းလေးပေါ် ပျော်ပျော်ကြီး ပြန်သွား ကြရတော့ မလိုလို။
Diploma In Buddhism 2013/2014 (21st Intake)
in ဘာသာရေးသတင်း - on 6/24/2013 - No comments
*** Successful Candidates: Eligible to enroll for 2014 BA degree ***
စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလ၀ိဟာရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ Buddhist & Pali University အသိအမှတ်ပြု Diploma In Buddhism ၀င်ခွင့်အတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
Course preview : July6& 13 (3pm-4pm), 2013 (Saturdays)
Registration period : July 14 to August 16, 2013
Registration Fee : US$52 with Buddhist & Pali University, Sri Lanka
Maintenance fee : S$240 ($20x12 months)
Date commencement: 6th Oct 2013
Venue: Mangala Vihara Temple(MV) 30 Jln Eunos, S419495
Class : Tuesdays (7:30pm-9:30pm) , Sundays (2:00pm-5:15pm)
Media : English
Classes are conducted by qualified graduates of the Buddhist and Pali College of Singapore.
Contact for further enquirers:
Maureen Hui : 96282069 , mayaahui@hotmail.com
Vasana Chua : 98347318, vasana_cpn@yahoo.com.sg
Edwin Tan : 96179850, edwinkwant@mirage.sg
Mangala Vihara Temple (Tel: 6744-4285)
e-flyer for more information (PDF)
in ဇင်ဝေသော်, ရပ်သတင်း ရွာသတင်း - on 6/24/2013 - No comments
အာရှခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်၊ တွစ်တာတွေကြည့်တော့ ဦးသိန်း စိန် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ လိုက် နည်းနေတယ်။ မြန်မာတွေက လိုက် လုပ်ရာမှာ စတင်းဂျီး (stingy) ဖြစ်ဟန်တူပါရဲ့။ ဒီနေ့ စထရိတ်တိုင်း သတင်းပါ။
Over 600,000 followers on Twitters.
Population: 1,2 billion
Nearly 2.5 million followers on Twitter.
Prime Minister: Shin Zo Abe
About 368,000 "likes" on Facebook, over 137,000 followers on Twitter.
Over 1.7 million Facebook "likes" and 1.6 million followers on Twitter.
About 6400 "likes" on Facebook and 300 followers on Twitter.
President: Beningno Aquino
Over 2.8 million "likes" on Facebook, while his Twitter account has nearly 1.56 million followers
Over 137,000 followers on Facebook and more than 32,000 followers on Twitter.
President: Ma Ying-Jeou
Over 1.4 million followers on Facebook
Prime Minister: Yingluck Shinawatra
Over 800,000 "likes" on Facebook, 134,000, followers on Twitter.
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အင်ဒိုသမ္မတက Facebook မသုံးကြဘူး။
ထိုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသား စာရးဆရာတွေကို ပေးတဲ့ဆု အမျိုးသမီးရသွားတာက ဘာထူးသေးလို့လဲ ဒီအပတ်ထဲမှာ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပြီး "Face" book ဂုဏ်ထူး ရ သွားတဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကမှ ထူးတာ။ မဂ္ဂဇင်းက "Face" book ဖြစ်ရတယ် လို့။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ရပ်သတင်း ရွာသတင်း
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/23/2013 - No comments
အင်္ဂလိပ်တို့ ကိုလိုနီချဲ့စဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံများ အနေနှင့် အနည်းနဲ့ အများ ဘာသာရေးအားနည်းသွားမှုတွေ ရှိခဲ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ရ လိုက်သည့် အချက်ကိုလည်း မမေ့သင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာ ပြန်ရလိုက်သလဲဆိုလျင် ဆာ အက်ဒွင် အာနိုးဟု ဆိုရပါလိမ့် မည်။ သူသည် အန္ဒိယကိုလိုနီနယ်သို့ တာဝန်ဖြင့် ရောက်လာရသူ ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ယဉ်ကျေးမှုကို ထိတွေ့၊ လေ့လာ၊ ခံစားမိရင်း ဂန္တဝင် ကဗျာရှည် ကြီးကို မွေးဖွား ရေးသားနိုင်ခဲ့သည်။
အနောက်ကမ္ဘာသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်သွားရာတွင် ဆာ အက်ဒွင် အာနိုး၏ "အာရှတိုက် အလင်းရောင်" က အကြီးမားဆုံး အင်အားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတိုင်းက အားနည်းသွားသည့် ပြည်တွင်း ဘာသာရေး အား တို့ကို ပြန်လည် ထိမ်းမတ်နိုင်သည်ဆိုလျင် အာရှတိုက် အလင်းရောင် က ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အသားတင် အမြတ်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာရေး ရှုဒေါင့်ကကြည့်လျင် ကျွန်ုပ်တို့ မရှုံးလှပါ။ အရှုံးရှိသလို အမြတ် လည်း ရလိုက်ပါသည်။ အာရှတိုက် အလင်းရောင် ကို အင်္ဂလိပ်တို့ ဖျက်ဆီး လို့မရတော့ပါ။
ပုဂ္ဂလိက အမြင်အားဖြင့် ဤသည်မှာ သဘာဝ ဘက်မျှမှုအားတစ်ခု ဖြစ် သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖြူစင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြလျင် ဖြူလျှင် ညစ်ထေး လွယ် သည်ဟုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ထားကြသင့်သည်။
in ဇင်ဝေသော်, ရပ်သတင်း ရွာသတင်း - on 6/22/2013 - No comments
၁။ ဝိလီယံ ဂါးလက်ရဲ့ အုန်းဂိုး
စနေဆိုတော့ ဘောလုံးလေးနဲ့ စလိုက်ပါရစေ။ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုက "ဂိုးစောင့်" ဥပဒေမူကြမ်းကို ဖီဖာမှာတင်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဂိုးဆိုတဲ့နေရာမှာ သူများရှူးတဲ့ ဂိုး၊ ကိုယ့်ဂိုးကို ပြန်ရှူးတဲ့ဂိုးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဂိုးကို ပြန်ရှူးတဲ့ဂိုးဆိုရာမှာလည်း မတော်တဆ ဝင်သွားတဲ့ ဂိုးနဲ့ သက်သက်မဲ့ ကိုယ့်ဂိုးပေါက်ထဲ ကန်သွင်းတဲ့ ဂိုးဆိုတာ ရှိပြန်ပါတယ်။ ဥပမာ ဝိလီယံ ဂါးလက်က သူ့ကို တော့တင်ဟန်ကို ပြောင်းခွင့် မပေးရင် အရေးကြီးတဲ့ပွဲ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ဂိုးပေါက်ထဲ ပြန်ကန်သွင်းမယ် လို့ ကြုံးဝါသံမျိုးပါ။
ဒီ ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ဂိုးသမားက ဂိုးဖမ်းတော့မယ် (သို့) ပုတ်ထုပ်တော့မယ် ဆိုရင် နောက်တန်း လေးယောက်ရဲ့ သဘောတူညီမှုရမှ၊ နောက်ပြီး ကိုယ့် သဘောနဲ့ကို ဖမ်းတယ် (သို့) ပုတ်ထုပ်တယ်ဆိုတာ လက်မှတ်ရေးထိုးရပါ မယ်။ စသဖြင့် စသဖြင့်။ ဒီ ဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်မတူကြ တာတွေတော့ ရှိပါတယ်။
တချို့ပညာရှင်တွေ အဆိုအရကတော့ ဒီ ဥပဒေမူကြမ်းကိုယ်တိုင်ကပင် ဝိလီယံ ဂါးလက်ရဲ့ ဂိုးလို အုန်းဂိုးကြီးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
၂။ ထိုင်ပြီး ဆုတောင်းနေကြတာပေါ့
နောက်သတင်းကတော့ အင်ဒို သစ်တောဝန်ကြီးရဲ့ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ အကြောင်းပါ။ တောမီးလောင်ရာကစပြီး ဟော့တ်ဖြစ်နေတဲ့ ဟေ့ဇ် အကြော င်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ သူပြောပုံလေးက
"We have considered creating artificial rain to put out the fires, but that would take two weeks. So we have decided to leave it in the hand of nature. And let's just pray for that."
မိုးအတုရွာပြီး မီးငြိမ်းသတ်ဖို စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့ ဒါက နှစ်ပတ်အချိန်ယူရမယ်၊ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝတရားလက်ထဲ ဝကွက်အပ်လိုက်ပါတယ်။ ထိုင်ပြီး ဆုတောင်းနေကြတာပေါ့ တဲ့။ လေးစားစရာ ဝန်ကြီးပါပဲ။
၃။ ကံမကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ
ဒါကတော့ အပြင်ကလူတွေရဲ့ အမြင်ပါ။ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီဟာ စူပါ ပါဝါ ကြီးနှစ်ခုအောက်မှာ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေနေရရှာတယ် တဲ့။ ပထမ စစ်တပ်။ ဒုတိယ လက်ယာဝါဒီ ဘုန်းကြီးထု တဲ့။ ဒါက ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ ကောက်ချက်ပါ။
သတင်း သုံးပုဒ်ကို ချုပ်ကြည့်တော့ ဘာသာရေးစကားဆိုတာ (And let's just pray for that စတာမျိုး) မဆိုင်တဲ့အချိန်၊ မဆိုင်တဲ့နေရာမှာ လာပြောရင် ကိုယ်ဘာသာပဲမှန်ပြီး သူတပါးအတွက်တော့ ဝိလီယံ ဂါးလက် ရဲ့ အုန်းဂိုး ဆိုတာ နားလည်လိုက်ရပါတယ်။
၄။ ၇ နှစ် သမီးလေး
လောကကြီးဟာ ထင်သလောက် ဗရုတ်သုတ်ခ မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကို ၇ နှစ်အရွယ် အမေရိကန်မလေးက သက်သေပြနေပါတယ်။ သူမက သမ္မတ အိုဗားမာဆီ စာရေးပါတယ်။ ဒီလို......
"Please ask your good friend the President of Indonesia to stop burning the forest. It is not good for both people and animals, especially endangered species. The sun is also red, People are even having to wear masks. Airplanes can't fly. McDonald's won't deliver." ၇ နှစ် သမီးလေးက လူတွေအတွက်ပါမက မျိုးတုန်းနိုင်တဲ့ သတ္တ ဝါတွေအတွက်ပါ လှမ်းပူနေတော့ ထင်သလောက် မဆိုးသေးပါဘူး။ အခြေအနေ ကောင်းပါသေးတယ်။
The haze, the brave or the craze
in ဇင်ဝေသော်, ရပ်သတင်း ရွာသတင်း - on 6/21/2013 - No comments
အရာတိုင်းဟာ ဘာမှ မမြင်ရအောင် ဝေဝါးနေလေတော့ရဲ့
စင်္ကာပူရဲ့ (The haze) PSI က ၁၁ နာရီမှာ ၄၀၀ ကို ရောက်သွားပြီ။
"the brave or the craze"
တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက The Face of Buddhist Terror တဲ့၊ ဝီရသူရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့။
ပေးထာားတဲ့ ဂုဏ်ထူးက "the Burmese bin Laden" ဗမာ ဘင်လာဒင်။
ဝီရသူကတော့ the brave လား the craze လား။
အဆုံး အစမရှိ ဝေဝါးကုန်ပြီ။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဘာသာရေး နားလည်သည်းခံမှုသည် အဓိက
in ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 6/21/2013 - No comments
Nehginpao Kipgen ရဲ့ စထရိတ်တိုင်း ဆောင်းပါး Religious tolerance key to Myanmar's democracy ကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်ဆိုထားတာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိတဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲ မြန်မာဟာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ် သို့သော် ၁၉၄၀ ခုန်ှတွေကစလို့ ပါလီမန်ထဲမှာပင် ဘာ သာရေးက အခရာ ကျခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ခွဲခြားထားတယ်၊ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူများ ရာထူးမြင့်မြင့် မရကြ။
သူရရွှေမန်းက ဘာသာရေး ပြဿနာ မရှိဘူးလို့ ဒီလထဲမှာပဲ ဆိုခဲ့ပေမဲ့ တ ကယ်က ခွဲခြားမှုတွေ ရှိနေဆဲပါလို့လတ်တလောအနေအထားကို ထောက်ပြ တယ်။
ဗမာ၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ တရုတ်တို့ကြားတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ အရေအတွက် များပြီး အစိုးရ စာရင်းဇယား အရ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၈၉. ၂ ရာခိုင်နှုံး၊ ခရစ္စယန် ၅ ရာခိုင်နှုံး၊ မွတ်စလင် ၃. ၈ ရာခိုင်နှုံး၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ ၁. ၂ ရာခိုင်နှုံး၊ ဟိန္ဒူ ၀. ၅ ရာခိုင်နှုံး ဖြစ်တယ်။
အခုအထိ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရဆဲ ကချင်လက်နက်ကိုင် ပြဿနာဟာ ဗုဒ္ဓဘာ သာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဦးနု အစိုးရလက် ထက်မှာ စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ မကျေနပ်တဲ့ ခရစ္စယန်ဘာသာဝင် ကချင် တိုင်း ရင်းသားများက စတင် ပုန်ကန်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ ကြားမှာလည်း ဘာသာရေးအခြေခံပြီး ကရင်းခြင်း ကွဲပြားနေကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆိုရာ၌ပင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ္စယန်ဘာ သာ ဟု ရှိနေကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
နောက်ပြီး ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ရိုဟိန်ဂျာပြဿနာ၊ ဘူးသီးတောင် ၊ မောင်းတော နှစ်မြို့နယ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ဥပဒေ ကို သူက ဆက်ထောက်ပြတယ်။
လူထုတစ်ရပ်လုံးက အထူးလေးစားတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့ထဲမှာလည်း ရဟန်း တ ချို့ကြောင့် သဘောထား ကွဲလွဲမှုရှိနေနိုင်ကြောင်း အထူးသဖြင့် အမျိုးသားေ ရး ဝါဒ ပြင်းထန်သူ ဝိရသူနဲ့ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အမျို့စောင့် ဥပဒေ မူကြမ်းအကြောင်း၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ စီးပွားရေး အဆက်အဆံ မလုပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး သူဆွေးနွေးရေးသားသွားတာကတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုရာမှာ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်မှု ရွေးချယ်ခွင့်၊ ယုံကြည်မှုအချင်းချင်း နားလည်၊ ခွင့် လွှတ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး လက်ပွန်းတတီးရှိလှ တဲ့ မြန် မာနိုင် ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဘာသားရေးကိစ္စဟာ အရေးကြီးလှကြောင်း ပါပဲ။
Religious tolerance key to Myanmar's democracy.
By: Nehginpao Kipgen
The writer is general Secretary of the US-based Kuki international Forum, and researches on the politics of South and South-east Asia, withaconcentration on Myanmar.
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 6/20/2013 - No comments
ဒီ တောမီးလောင်မှူတွေ ဘယ်ကစတာလဲလို့ စထရိတ်တိုင်း သတင်းေ ထာက်က မေးတော့ မီးငြိမ်းသတ်သူတွေထဲက တစ်ယောက်က "This is the act of God." ထာဝရ ဘုရားရှင် အလိုကျဖြစ်တာလို့ ဖြေတယ် တဲ့။
ဒီ အတွက် မီးငြိမ်းသတ်ရင်း အပိုဝင်ငွေပါရလို့ သူကတော့ ပျော်တောင် ပျော်သေးတယ် လို့ ဆက်ပြောတယ်။
ပါးစပ်က အဲသလိုပြောနေပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင် အသက်ရှူလို့ မဝဘူး၊ ရင်ဘတ်လည်းအောင့်နေတယ် လိုတော့ ငြီးငြူလျက်ပါပဲ လို့ သတင်းထောက် က ဆက်ရေးထားတယ်။
ဒီ ပြသနာကြားထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတာက စင်္ကာပူ အစိုးရပါပဲ။ အသက် ရှူမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ အဲသလို လူနာတွေ အ တွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ ဆေးရုံ၊ ဆေး ခန်းတွေ ကို ချက်ချင်း ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်တယ်။
လယ်သမားက စားအုံးဆီပင် မီးရှို့တာနဲ့ ဆေးရုံထဲက ဆရာဝန် အလုပ်ရှုပ် တာ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောချင်ရင်လည်း ပြောလို့တော့ ရမှာပေါ့လေ။
အသက် ၉၀ အရွယ်ရှိ (90 years young) လီကွမ်ယု အနှစ် ၅၀ မြောက် သစ်ပင်စိုက်ပွဲမှာ ဂေါ်ပြားနဲ့ သစ်ပင်စိုက်နေတဲ့ပုံ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သတင်းစာမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 6/19/2013 - No comments
ဆရာမ။ ။ လီလီရေ၊ သစ်ပင်ပေါ်မှာ ငှက် ငါးကောင် နားနေတယ်၊ တစ်ကောင်ကို လေသေနတ်နဲ့ ပစ်ချလိုက်ရင် ဘယ်နှကောင် ကျန်မလဲ။
လီလီ ။ ။ တစ်ကောင်မှ မကျန်ပါဘူး ဆရာမ၊ သေနတ်သံကြားရင် အားလုံး လန့်ပြီး ပြန်ပြေးကြမှာပါ။
ဆရာမ။ ။ မဟုတ်ဘူးကွဲ့၊ အဖြေမှန်က လေးကောင်ကျန်တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သမီးတွေးပုံကို ဆရာမ သဘောကျတယ်။
လီလီ ။ ။ ကျေးဇူးပါ ဆရာမ၊ သမီးလည်း ဆရာမကို တစ်ခုမေးချင်တယ်။
ဆရာမ။ ။ မေးပါ သမီး။
လီလီ ။ ။ အမျိုးသမီးသုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်က ထမင်းချက်နေတယ်၊ တစ်ယောက်က မိတ်ကပ်လူးနေတယ်၊ တစ်ယောက်က တီဗွီကြည့်နေတယ်။ သူတို့ သုံးယောက်မှာ ဘယ်သူက အိမ်ထောင်ရှင်လဲ။
ဆရာမ။ ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ထမင်းချက်နေသူဟာ အိမ်ထောင်ရှင်ပေါ့ ကွယ်။
လီလီ ။ ။ မဟုတ်ဘူး ဆရာမရဲ့။ အဖြေမှန်က လက်ထပ်လက်စွပ် ဝတ် ထားသူတဲ့၊ ဒါပေမဲ့ ဆရာမတွေးပုံကို သမီးလည်း သဘောကျတယ်။
ဆရာမနဲ့ လီလီတို့ ကွန်ဗာဇေးရှင်းကတော့ ပြီးသွားပါပြီ၊ နောက်တွေ့မှပဲ ပညာရှင်လီလီလေးကို မေးရမယ်....
မြန်မာပြည်မှာ သမ္မတလောင်း သုံးယောက်ရှိတယ် သမီး။ သူတို့ သုံးယောက် အနက် ထောင်ထွက်နဲ့ တပ်ထွက်ကို နှုတ်လိုက်ရင် ဘယ်နှယောက် ကျန်မ လဲ လို့။
"စားဘုန်း" နှင့် အရွယ်ယ်ကပေးသည့် သင်္ခန်းစာ(ကျောင်းတွင်းမှတ်စု)
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 6/19/2013 - No comments
ငယ်စဉ်က ဆရာ့ ဆရာများစကားကို ကြားရစဉ် ရယ်စရာသဘောမျိးဖြင့် မိန့် ကြသည်ဟု ထင်မိသည်။ ပေးဘုန်း၊ ကျွေးဘုန်း၊ မေးဘုန်း၊ စာဘုန်း စသည် တို့ဖြစ်သည်။ ပေးဘုန်း၊ ကျွေးဘုန်း ဟူသည် အပေးအကမ်းရက်ရောသော ဆရာတော်များ ဘုန်းကြီးတတ်သည်၊ မေးဘုန်းက သတင်းစကားမေးခြင်း၊ သာကြောင်းမာကြောင်း စသည်မေးမြန်းလေ့ ရှိခြင်းပင်။ ဤသည်ကလည်း ဘုန်းကြီးခြင်းအကြောင်းတွင်ပါဝင်သည်၊ သာကြောင်းမာကြောင်း စ သည်ပြောကြားခြင်းဖြင့် ဒကာ၊ ဒကာမတို့စိတ်ကို ညွတ်နူးစေ၏။ "ကစ္စိ ဘိက္ခဝေ ခမနီယံ၊ ကစ္စိ ယာပနီယံ" စသော ဘုရားရှင်၏ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားတို့သည် ဤသဘောအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပေမည်။
သို့သော် "စားဘုန်း" ဆိုသည့်စကားကိုတော့ မကြာမီအချိန် အထိ ကောင်းေ ကာင်း သဘောမပေါက်ခဲ့ပါ။ လူကြီး ဖြစ်စမှာတော့ ရေးတေးတေး သဘောပေါက်သလို ရှိခဲ့သည်။ ယခင်က စားရသောကိစ္စက လွယ်သည်ဟု ထင်သည်။ "စားဘုန်း" နှင့် စာပေကိုလည်း ဆက်စပ် မကြည့်နိုင်ခဲ့။
စာသင်သား ဘဝ၊ ရဟန်းငယ်ဘဝ မှာ လူတွေက ဘာပဲကပ်ကပ် ကိုယ် ကြိုက်ရာကို စားလိုက်သည်၊ မကြိုက်ဘူးဆိုလျင် တို့လို့ပင် မကြည့်မိ။ အရွယ်ရလာတော့ သူတို့ခမျာ ချက်ထားရရှာတာဆိုသည့် အတွေး ဝင် လာတော့သည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိုင်က လူကြီးအနေနှင့် အိမ်များကို ဆွမ်းစားသွားရသည့်အခါ ရဟန်းများ ဘုန်းပေးလေလေ ဒကာ၊ ဒကာမတို့က ကြည်နူးလေလေဖြစ်သည်ကို ကိုယ်တွေ့ ခံစားတတ်လာသည်။ အပြန် အ လှန် အားဖြင့်ကြည့်လျှင် ရဟန်းများက အားရပါးရ မဘုန်းပေးလျင် ကြားထဲ က မျက်နှာ ပူသလိုလိုဖြစ်လာသည်။
မန္တလေးမှာ နေစဉ် ဆရာဘုန်းကြီးက ဆွမ်းစားနိုင်သည့် ရဟန်းတို့ ကို ရွေး ပြီးဆွမ်းစားခေါ်သွားတတ်သည့် သဘောကို ယခုမှ သဘောပေါက် မိသည်။ ဒကာ၊ ဒကာမတို့စိတ်ကို ညွတ်နူးစေလိုခြင်း သာ ဖြစ်ပေသည်။ မေတ္တာ ကရု ဏာ သဘောပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာဒကာ၊ ဒကာမ၊ မြန်မာဆရာတော်များကြား၌ကား မြန်မာ အစား အစာ များသာကပ်ကြသဖြင့် အခက်အခဲက ထင်သလောက် မကြီးလှဟုထင်သည်။ လူမျိုးခြားများ ကပ်သောဆွမ်းဖြစ်နေလျှင် ပို၍အခက်ကြုံရသည်။ ကိုယ့်လျှာနှင့် မကိုက်သော်လည်း ခဲဖွယ်များဖြစ်သဖြင့် ကြိတ်ကာ မှိတ်ကာ "ခဲ" ရသည်။ ထို့ကြောင့် စလုံး ဒကာ၊ ဒကာမတို့ကို "You do your best for cooking. Then, we will try our best for eating." ဟုသာ ပြောရလေေ တာ့သည်။
Image source : သောတုဇနပအိုဝ်းပေးblog
စားရသောကိစ္စက လွယ်သည်ဟု ယခု မထင်မိတော့။ သူတို့ စိတ်ကြည်နူး မှုရစေရန် သင့်ရုံတော့ မကြိုက်လည်း စားရတော့သည်။ သူတပါးကို စိတ် ကြည်နူးမှုရစေလိုသဖြင့် ကုသိုလ်တော့ ဖြစ်တန်ရာ၏။ ဤအချက်ကို နား လည်ကြသည့် နီးစပ်သော မြန်မာ ဒကာ၊ ဒကာမတို့က မြန်မာ အစားအစာ များ ဘုန်းပေးရအောင်ဆိုပြီး အိမ်ပင့်၍ မကြာမကြာ ကပ်ကြသည်။ ထို ဆွမ်း မျိုးကို သဒ္ဓါဆွမ်း (သို့) သနားဆွမ်းဟု ခပ်သောသော အမည်ပေးလိုက်သည်။
ထိုမှဆက်စပ်ပြီး "စားဘုန်း" နှင့် စာပေကို လေ့လာကြည့်မိတော့ ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါတော့သည်။ ဤကား ပရိနိဗ္ဗာန် မစံဝင် မီ ဘုန်းပေးခဲသည့် စုန္န၏ ဝက်ပျိုသားဟင်းလျာပင် ဖြစ်ပေသည်။ စာပေက စုန္နကို ချီးမြှောက်လိုသောကြောင့်ဟုဆို၏။ ခေတ်စကားဖြင့်ဆိုလျင် စုန္နကို ဝမ်းသာစေလိုသောကြောင့်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မဟာကရုဏာ၏ ပြယုဂ် တစ်ခု ပင်။
ယခု စားရသောကိစ္စက လွယ်သည်ဟု မထင်မိတော့သလို "စားဘုန်း" အကြောင်းကိုလည်း သဘောပေါက်မိသည်။ စာပေနဲ့လည်း ညီ၏။ မကြိုက် လှသော အစားအစာတို့ကို သင့်သလို လှူသူကျေနပ်ဖို့ ဘုန်းပေးရာမှာ စာနာ မှု၊ ချီးမြှောက်လိုမှု၊ ငါကြိုက်မှ ငါစားမှာပေါ့ ဆိုသည့် အတ္တဗဟိုပြု အယူ အဆ ကို ကျော်လွန်မှု စသည်တို့ ပါဝင်နေသည်။
အထူးသဖြင့် ဘုန်းကြီးလို၍ ဘုန်းပေးနေကြခြင်း မဟုတ်ဆိုသည်ကို နား လည်လိုက်မိ၏။
in The World Joke, ဇင်ဝေသော်, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/18/2013 - No comments
ပုဆိန်လွတ်ကျပြီး ငိုနေတဲ့ သစ်ခုတ်သမား အကြောင်းကိုတော့ ကျနော် တို့ လေ့လာခဲ့ရပြီးပါပြီ။ သစ်ခုတ်သမားလည်း သူ့ရိုသားမှု၊ သစ်ပင်စောင့် နတ် ကူညီမှုကြောင့် ရွှေပုဆိန်၊ ငွေပုဆိန်၊ သံပုဆိန် ရခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီ ပုံပြင် အသစ်ထဲမှာတော့ သစ်ခုတ်သမားရဲ့ ဇနီး မြစ်ထဲကို ကျသွားခဲ့ပါ တယ်။ ဒီ သစ်ခုတ်သမားက မြန်မာလူမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလူမျိုးဆိုတာလည်း မသိပါဘူး။
ဇနီး မြစ်ထဲကျသွားခဲ့တော့ ခေတ်သစ် သစ်ခုတ်သမားလည်း ငိုတာပါပဲ။ အဲဒီအချိန် သစ်ပင်စောင့်နတ် ရောက်လာတယ်။ မင်းဇနီးကို ငါ ဆယ်ယူပေး မယ်ဆိုပြီး မြစ်ထဲကနေ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဆယ်ယူလာတယ်။ သူမက စကားလက် ဂျိုဟန်ဆင် (Scarlett Johansson) ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက စကားလက် ဂျိုဟန်ဆင်ကို ပြပြီ သူလေးက မင်းဇနီးလား လို့မေးတယ်။
သစ်ခုတ်သမားက မှန်ပါတယ်ဆိုပြီး စကားလက် ဂျိုဟန်ဆင်ကို ယူထား လိုက်တော့ နတ်က ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။
"လူသား၊ မင်းဟာ လူလိမ်၊ လူညာ" စတဲ့ စကားတွေနဲ့လည်း စွပ်စွဲပုတ်ခတ် ပါတယ်။
"ခွင့်လွှတ်ပါ နတ်မင်း။ စကားလက် ဂျိုဟန်ဆင်ဟာ ကျနော့ဇနီး မဟုတ်ပါ ဘူးလို့ငြင်းလိုက်ရင် နတ်မင်းကြီးက အခြား ချောချော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို ဆယ်ယူလာပြီး မင်းဇနီးလား လို့မေးဦးမှာပါ။ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတော့မှ ကျနော့် ဇနီးအစစ်ကို ဆယ်ယူလာပြီး မင်းဇနီးလား လို့မေးမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ နတ်မင်းကြီးက ကျနော့် ရိုးသားမှုကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သုံးယောက်စလုံး ပေးလိုက်မှာပါ။
ဒီ ပရိုစီဂျာကို ကျနော် ကောင်းကောင်း သိထားပါတယ်။
ကျွန်တော်မျိုးက ဆင်းရဲသားပါ။ မိန်းမသုံးယောက်ကို ကျွေးမထားနိုင်ပါ၊ ဒါ့ကြောင့် စကားလက် ဂျိုဟန်ဆင်လေးကိုပဲ ရွေးလိုက်မိပါတယ်" တဲ့။
ပြီးတော့ သူက စကားလက် ဂျိုဟန်ဆင်ဖက်လှည့်ပြီး
"ချစ်လေး၊ သွားကြစို့။ ဘိုင့်ဘိုင် နတ်မင်းကြီး" ဆိုကာ စကားလက်ရဲ့ လက် ကိုဆွဲကာ ထွက်သွားတော့တယ် တဲ့။
Labels: The World Joke, ဇင်ဝေသော်, ခေတ်သစ်ပုံပြင်
in ဘာသာရေးသတင်း, သီဟနာဒ - on 6/18/2013 - 1 comment
ကျွန်ုပ် ရေးခဲ့သည့် "ပရိုက်ဘိတ်ဂျက်နှင့် ၂၁-ရာစုဈာန်ရ ရဟန်းတော်များ" ဆောင်းပါး ဟောစာတန်းက သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရ။ ချမ်းသာသော ထိုင်း ရဟန်းတို့ ပရိုက်ဗိတ်ဂျက်ဖြင့် ဈာန်ပျံချေပြီ။ မြန်မာရဟန်းတို့ မပျံနိုင် ကြသေး။ ယူကျုပေါ်အထိ ရောက်သွားသည့်အတွက် (ပထမဆုံးအကြိမ် လည်း ဖြစ်နေရကား) ဝေဖန်သံများ ထိုင်းမှာ တော်တော်ညံသွားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သွားရောက် စစ်ဆေးရန် ဈာန်ပျံတော်မူကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ချမ်းသာသည့် ရဟန်းတော်များ(သို့ )လူချမ်းသာကိုးကွယ်သည့် ရဟန်းတော် များက ပရိုက်ဗိတ်ဂျက် ဆက်စီးလာစရာ ရှိပါသည်။ ဝေဖန်သံများကို ထို ရဟန်းတို့က ဂရုစိုက်တော်မူကြမည်မဟုတ်ပါ၊ ထို အရှင်မြတ်တို့ ဂရုစိုက် သည်က ပရိုက်ဗိတ်ဂျက် စက်မပျက်ရေးသာ ဖြစ်ပေမည်။
ချမ်းသာသည့် ရဟန်းတော်က(သို့ )လူချမ်းသာကိုးကွယ်သည့် ရဟန်းတော် က အခြားခရီးသည်များ၊ အခြားရဟန်းတော်များနှင့် အတူ လေယာဉ် စီး လျင် ဂုဏ်ငယ်သည်ဟု ထင်ကောင်းထင်ပေလိမ့်မည် (ဘုန်းကံကြီး မားသော အချို့ ရဟန်းတော်များ လိုင်းကား၊ ဘတ်စ်ကား စီးချင်တော် မမူကြသလို)။ ထိုအခါ မဝယ်နိုင်သေးလျင်ပင် ပရိုက်ဗိတ်ဂျက် စင်းလုံးငှားပြီး ခရီးထွက်စေ ပါလိမ့်မည်။ သိက္ခာပုဒ် အထင်အရှား မရှိသဖြင့် ဝိနည်းကြောင်း အရ ပြောစ ရာ အထွေအထူးမရှိပါ။ မသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်၊ သာသနာတော့ ကွယ်တော့ မှာပဲ ဟုလောက်သာ (တချို့က "သာသနာကွယ်" ဆိုသည့်ဝေါ ဟာရကို သုံး စွဲရန် အတော် နှစ်ခြိုက်ဟန်တူ၏၊ မကြာမကြာ သုံးကြသည် ) ပြောလို့ရမည်။
အမှန်တော့ ဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းတော်များ အစမှာ ခြေဗလာ ဖြစ် သည်။
ထို့နောက်.. သင့်တော်သည့် ဖိနပ်။
ထို့နောက်.... လှည်း၊ လှေ။
ထို့နောက်.... ကား (ကိုယ်ပိုင်၊ မပိုင်။ ပါဂျဲရိုး၊ မရိုး၊ လင့်ခရုဇာ မဇာ စသည် )၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်။
ထို့နောက်.... လေယာဉ်။ ပရိုက်ဗိတ်ဂျက်။
ဘာမှ မထူးခြားလှတော့ပါ။ ထိုင်းရဟန်းတို့ ပရိုက်ဗိတ်ဂျက်ဖြင့် ဈာန်ပျံချေပြီ။ မုဒိတာ ပွားလိုက်မိပါ၏။ ပရိုက်ဗိတ်ဂျက်သည် ဈာန်အစားထိုး ပစ္စည်း ဖြစ်၏။
ချမ်းသာသည့် ရဟန်းတော်များ(သို့) လူချမ်းသာကိုးကွယ်သည့် ရဟန်းတော် များက ဤရာစုအတွင်း လကမ္ဘာသို့ပင် ပရိုက်ဗိတ်ဂျက်ဖြင့် ခရီးဆက်ကြ ဦး မည်ဟု အိမ်မက်အသစ် ထပ်မက်နေမိပြန်ချေသေး၏။
Link : Thai Buddhist monks criticised for lavish behaviour
Justacomment from one web page :)
Labels: ဘာသာရေးသတင်း, သီဟနာဒ
ဒလိုင်းလားမား v စံဇာနည်ဘို
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 6/17/2013 - No comments
ဒလိုင်းလားမားကြီးကတော့ လိုအပ်ရင် အစဉ်အလာဖောက်ဖို့ ဝန်လေးဟန် မတူဘူး။ သူ့နေရာကို ဆက်ခံမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အရင်တပတ်က ပြောနေပြန်တယ်။
သူ့အကြောင်းပြချက်က ကမ္ဘာကြီးဟာ ဒုက္ခသုက္ခတွေများလွန်းတော့ ကရု ဏာရှင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကို ပိုပြီးလိုအပ်လာနေလို့ပါ တဲ့။ အမျိုးသမီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် (ဘိက္ခုနီသာသနာကို လက်မခံတဲ့ ) ထေရ ဝါ ဒ လေးနိုင်ငံခွဲကို (သီဟိုဠ်မှာ တချို့က လက်ခံပါတယ်) အသာထားတိဗက် တန် ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာတောင် သဘောမတူသူတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ အားတက်သရော ထောက် ခံကြမှာ သေချာပါတယ်။
စံဇာနည်ဘိုနဲ့ ဒလိုင်းလားမား ဘယ်သူက မှန်မလဲ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ စံဇာနည်ဘိုက ၂၀၁၄ ကနေ ၂၀၁၅ ကို တရားဝင် ပြောင်းခွင့်ရှိ တယ်။
- on 6/16/2013 - No comments
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်က သီရိလင်္ကာဆရာတော်တစ်ပါးက သူ၏ ဘွဲ့ယူ စာတန်းအတွက် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အရှာခိုင်းသည်။ ထိုစာအုပ်က ထိုင်းနိုင် ငံမှာ ရှိရှိသမျှလူဝင်စားတို့ကို သုတေသနပြုရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ် သည်။ သူ့ အဆိုအရ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ရာ၌ပင် ဤစာအုပ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရအောင်ရှာဖွေပေးရန် အကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင် လည်း ထိုစာအုပ်အမည်နှင့်တကွ (ယခု စာအုပ်အမည် မမှတ်မိတော့) ရအောင် ကြိုးစားပါ၏။ အရာတော့ မရောက်ခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံး မိတ်ဆွေ ရ ဟန်းမှ တဆင့် ဆရာကြီး ဦးဌေးလှိုင် (ဓမ္မာစရိယ) နှင့်တွေ့မှ အဆုံးသတ် သွားတော့သည်။
သူ့ အဆိုအရ မှန်၏။ ထိုင်းသံဃာတို့က ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့် ကိုက်ညီသဖြင့် ပါဠိ လိုပြုစုထားသည့် ဤစာအုပ်ကို (ဘုရားဟောတော့ မဟုတ်၊ သာဝကပြုစုေ သာ ကျမ်းစာအနေနှင့်) ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ရာ၌ ထည့်သွင်းရန် အကြံပြု၏။ သို့သော် မြန်မာရဟန်းတော်တို့က လက်မခံ၊ သင်္ဂါယနာတင်ရာ၌လည်း မပါ၊ စက်တင်ပုံနှိပ်ခြင်းလည်း မပြုဟု ပြန်ပြောပြခဲ့သဖြင့် သိခဲ့ရသည်။
သီရိလင်္ကာဆရာတော်တို့ကလည်း ဤနည်းအတိုင်း ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့် မဆန့် ကျင်သော ပါဠိလို ကျမ်းခိုင်တချို့ကို (ဘုရားဟောတော့ မဟုတ်၊ သာဝကပြု စုသော ကျမ်းစာအနေနှင့်) သင်္ဂါယနာတင်ရာ၌ ထည့်သွင်းရန် အကြံပြု ခဲ့ကြ သည်ဟု သိရ၏။ သို့သော် အထမမြောက်ခဲ့။
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပွဲ ပြီးဆုံးပြီး မိမိတို့ နိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ထို သံဃာတော်များ ပြန်လည် စု စည်းပြီး ထိုထိုကျမ်းစာတို့ကို ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ အသိအမှတ်ပြု ကျမ်းစာများ အနေနှင့် ကိုယ်တိုင် ပုံနှိပ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထို သီရိလင်္ကာဆရာတော် အရှာခိုင်းသောစာအုပ်က ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ မူအနေဖြင့် ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမီသော ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပွဲ အပြီး နိုင် ငံခြားသားရဟန်းတော်တို့၏ (ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေမှ ပြန်အကြွ) တုန့်ပြန်မှုဖြစ် သည်။ ပြည်တွင်းမှာ ဤလိုကိစ္စတွေ သိမီသူနည်းမည်ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရဲစွန့် ရေးလိုက်မိသည်။
သင်္ဂါယနာအဆက်ဆက်ကို လေ့လာကြည့်ရာမှာတော့ သင်္ဂါယနာတင်ပြီး တိုင်း ဂိုဏ်းကွဲများ ထွက်ထွက်လာတတ်သည်။ ထွက်လာသည့် ဂိုဏ်းကွဲ တိုင်းလည်း သူ့ဟာသူ မှန်ကြသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ပိဋကတ်သုံးပုံ အထင် အရှားရှိနေခြင်းဖြင့်ပင် အတန်တန်သောသင်္ဂါယနာတင် ဆရာတော်ကြီး များ ကျေးဇူးက များလှပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဥယျာဉ်မှားတဲ့သစ်ပင်(သို့) ခရီးကြမ်း သုံး
in ကဗျာရှည်, ဇင်ဝေသော် - on 6/16/2013 - No comments
ဒီနေ့က အဖေများနေ့မို့ ကျနော့်ကဗျာကို ခုန်ပြီး အဖေများဆီ ဂါရဝလှမ်း ဆက် လိုက်မိတယ်။
ရမ္မ သုဘ သုရမ္မ
အမျိုးမျိုးပြောင်း ခံစားလို့တော့ ရပါရဲ့
မပြောင်းရွှေ့ဘဲ နေမြဲ နေမရတာကိုက
အနိစ္စကို ပုံဆောင် နေပြန်ရော။
တဏှာက သွားရည် တမြားမြား
ဖွင့်ထွားထွား အာရုံက အားကောင်းမောင်းသန်
အကောင်ထွားထွား ကာမဂုဏ် မရှိဘဲ
ဒုက္ခကို ပုံဆောင် ပြပြန်ရော။
အရွယ်ဟိုင်း သစ်ရွက် မရှိ
ခမည်းတော်ရဲ့ ဥယျာဉ် အတုဟာ
အရွယ်လွန် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်
ဘယ်တော့မှ ငါ့သား အသက်မထွက်ဘူး။
ခုတ်သူတွေ အား ချိနဲ့
သူ့အား ကိုယ့်အား ချိနဲ့
ဘယ်သူ့ အား ဓါးနဲ့ မခုတ်ရတဲ့ စစ်တလင်း
စကြဝဠာရဲ့ မီးတိုင်ကို ညှိဖုိ့
ကမ္ဘာတည်မယ့် ကဗ္ဗည်း ထွင်းမလို့ပါ။
အာဟာရ မပြည့်တဲ့ အမှန်တရား
သင်္ခါရ ကိုလိုနီက လွတ်ကြပလား
ဒီ ဓါး လေး စကြာ ကျိုးတော့
ဒီလူဟာ ဓါးကျိုး ပိုင်ရှင်ပေါ့
ဓမ္မကို ပိုင်တော့ ဓမ္မဘုရင်
ဓမ္မသာ ကျိုး ပဲ့ခြင်း ကင်းစင်တယ်။
ကေါဏ္ဍည လက်ညှိုး တစ်ချောင်းကြောင့်
ကပိလဝတ္ထု ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ရသတဲ့
မာရ ရဲ့ လက်ညှိုးဆယ်ချောင်းကြောင့်
လွတ်လပ်မှူတွေ ရောင်းစားတာ ခံ ရ
ဒုက္ခတွေ မနိုင် မနင်း ထမ်းပိုး
ရိုကြိုး တဲ့ အိမ်ခွေးတွေလို
ဒါကိုကျ ကပိလဝတ္ထု မသိလိုက်ဘူး။
ပန်းလက်ဝါး နဲ့ လေးကြမ်တင်
ဒါတွေ ကိုစွမ်းနိုင်လို့ ..တဲ့
တစ်ရာ့တစ်ပါး မင်းတို့က ဦးခိုက်
ဆယ်ကျော်သက် ဘုရင်မိုက်လေး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဥယျာဉ်မှားနေတဲ့ သစ်ပင်ပါ။ ။
Labels: ကဗျာရှည်, ဇင်ဝေသော်
in ဇင်ဝေသော်, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/15/2013 - No comments
လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ လူတစ်စုဟာ အတူတကွ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အရက်သောက်ကြဖို့ လိုအပ်တာတွေယူလာခဲ့ပြီး အပြင်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ လူသွားလူလာ တော်တော်ရှင်းတဲ့နေရာ ရောက်တော့ ဒီနေရာမှာပဲ သောက် ကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက ဒီနေရာမှာဆိုပေမဲ့ ကားလမ်းပေါ်မှာလား၊ လမ်းဘေးက သစ်ပင်အောက်မှာလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ် ဖို့ ကျန်နေသေးတယ်။
ဒါနဲ့ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က ကားလမ်းပေါ်မှာဆို ပိုပြီး လင်းလင်း ထင်း ထင်းရှိတယ်၊ ကားလမ်းပေါ်မှာပဲ သောက်ကြမယ်လို့ အကြံပြုတော့ အားလုံး သဘောလိုက်ကြတာပေါ့။ သူတို့သောက်လို့ အရှိန်တော်တော်ရတော့ လမ်းပေါ်မှာ ကားတစ်စီး အရေးတကြီးနဲ့ အမြန်မောင်းလာတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ကို လည်း သတိထားမိပုံ မရပါဘူး။ အနားရောက်တော့မှ ကားလမ်းပေါ်မှာ လူ တစ်စုထိုင်နေတာကိုရုတ်တရက်ကြီး တွေ့လိုက်ရပြီး ဘေးရှောင်လိုက်ရတော့ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ကားက သစ်ပင်ကို သွားဆောင့်မလိုအထိ ဖြစ်သွား တယ်။
ဒါကို တွေ့လိုက်ရတော့ စောစောက အကြံပေးသူက
"တွေ့လား၊ ငါတို့ ကားလမ်းပေါ်မှာ မ သောက်လို့ သစ်ပင်အောက်မှာ များ သောက်မိရင် အားလုံး သေသူသေ၊ ကျိုးသူကျိုး ဖြ စ်နေပြီ တဲ့။
ဒီပုံပြင်ရဲ့ မော်ရယ်က " ဖိုးလပြည့်နဲ့ မော်တော်ပီကယ်" တဲ့။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 6/14/2013 - No comments
မေး။ ။ လူစိမ်းအမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကို လင်မယား ဖြစ်တယ် လို့ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ။
ဖြေ ။ ။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးက ကလေးတစ်ယောက်ထဲ ကို ဝိုင်း အော်ငေါက်နေလို့ပါ။ တစိမ်းတွေဆို အဲသလို မလုပ်ပါဘူး။
မေး။ ။ တရားနာတဲ့အခါ ဘယ်တရားမျိုးက ကောင်းပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး ကောင်းတဲ့တရားမျိုးပါ။ အထူးသဖြင့် အစနဲ့ အဆုံး သိပ်မကွာတဲ့ တရားက ပိုကောင်းပါတယ်။
မေး။ ။ အရွယ်တင် နုပျိုအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဖြေ ။ ။ အစား အအိပ်မှန်ပါစေ၊ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပါ၊ စိတ်ကောင်းမွေးပါ။ အထူးသဖြင့် အသက်ကိုမေးလာရင် လိမ်ပြောပါ။
(ဒုတိယ အမေးကို ဖြေတာက ဂျော့ဂ်ျ ဘားနတ်ရှောပါ၊ ကျန်တာတွေ မသိပါ)
သတင်းစာဖတ်ခြင်း အကျိုး (နဝမတန်း စာစီစာကုံး)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, သတင်း - on 6/14/2013 - No comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်သော ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအရှိဆုံး ထိပ် တန်း နိုင်ငံ ၂၀ တွင် အာရှမှ သုံးနိုင်ငံပါဝင်သည်ဟု သိရပါသည်။ ထို စာရင်း က ထူးတော့ မထူးခြားလှပါ၊ ထို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအရှိဆုံး ထိပ်တန်း နိုင်ငံ ၂၀ က အိုက်စ်လန့်မှာ အစပြုခဲ့သဖြင့် ရေခဲထူထပ်သောနိုင်ငံများနိုင်ငံများ၊ ရာသီဥတု အေးချမ်းသော နိုင်ငံများဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဂျပန် အဆင့်ခြောက်၊ စင်္ကာပူ အဆင့် ၁၆ နှင့် ဘူတန် အဆင့် ၂၀ တို့ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ အဆင့် ၂၀ တွင် ကျနော်တို့နိုင်ငံမပါဝင်ပါ။
ထို့ကြောင့် အောင့်သက်သက်ဖြင့် တစ်နေရာတွင် တွေ့လိုတွေ့ငြား ဆက် လက်ရှာဖွေကြည့်မိပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ စာရင်းတွင် ကျနော်တို့နိုင်ငံကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ (၁၀ ) ဆယ်နိုင် ငံအနက် အဆင့် ၉ တွင် ရပ်တည်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် အဆင့် ၉ မှာရှိနေရသည်ကို လေ့လာကြည့်ရာ ထိုစာရင်းတွင် ဘရူးနိုင်း မပါဝင်သည်ကို ထပ်တွေ့ရပြန်ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် စင်္ကာပူက တစ် ဖြစ်ပြီး ထိုင်းက အဆင့် ရှစ် ဖြစ်သည်။ ထိုင်းက အဘယ့်ကြောင့် အဆင့် ရှစ်မှာရှိပြီး ကျနော်တို့က အဘယ့်ကြောင့် အဆင့် ၉ မှာရှိနေရသည်ကိုရှာဖွေကြည့်မိသော်လည်း အဖြေ မရခဲ့ပါ။
သို့သော် ဆောင်းပါးများ ဖော်ပြသည့် သတင်းစာနောက်ပိုင်းမှာ ဆောင်း ပါး တစ်ပုဒ်တွေ့လိုက်ရပါသည်။ အမျိုးသမီးကြီး နှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားကြီး တစ် ဦး နိုင်ငံ နာမည်ကို ဘားမားဟု ခေါ်မလား၊ မြန်မာဟု ခေါ်မလားဟု အော်ဖစ် ရှယ် ငြင်းခုံနေကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်းက ကျနော် တိုရှေ့ ရောက်သွားသည်ဟု ဆိုက ရကောင်းရနိုင်ပါသည်။
အမှန်မူ ကျနော်တို့နိုင်ငံက ပျော်စရာ ကောင်းလှပါသည်။ မီးပျက်နေသည် ဆိုလျင်ပင် နိုင်ငံ၏နာမည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှောင်ထဲမှာ ထိုင်ငြင်းနေလို့ ရပါသည်။ အပူပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ခြင်း၊ မီးအမြဲလိုလိုပျက်နေခြင်းကြောင့် အေးအေး ချမ်းချမ်းအရှိဆုံး နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်ဖို့တော့ မလွယ်ပါ။
သို့သော် လူတိုင်း (ဘရာဇီးမှာ လူတိုင်းဘောလုံးနည်းပြ အရည် အသွေးရှိ သလို) သမ္မတဖြစ်နိုင်သော အရည်အသွေးရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် ဆက် လက်ငြင်းခုံနေစရာ Hot issue များ သူများထက် ပိုရှိနေပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ပျင်းစရာတော့ မကောင်းလှပါ။ ပျော်စရာပင် ကောင်းနေပါသေး သည်။
ဤသည်မှာ ယနေ့ သတင်းစာဖတ်ရခြင်း အကျိုးဖြစ်ပါသည်။
အချိန်းရှိလျှင် အနည်းဆုံး နိုင်ငံ့အမည်ကို အောဖစ်ရှယ် ထိုင်ငြင်းနေလို့ ရသည်ဟု လေ့လာမိလိုက်ပါသည်။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, သတင်း
ဘနားနား ယူနီဗာစီတီ (ကျောင်းတွင်းမှတ်စု)
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 6/13/2013 - No comments
ယနေ့ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များ အမည်ဆီ အာရုံကျသည်။ ကမ္ဘာကျော် တက္က သိုလ်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဟားဘတ်၊ ယေးလ်၊ မန်ဆာချူးဆက် ၊ အောက် စဖို့ဒ် စသော တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် "အင်တာနေရှင်နယ်" ဘာညာ စသော ဟိန်းလုံး ဟောက်လုံးကြီးများ မတွေ့ရ၊ နာမည်ရိုးရိုးလေးတွေသာတွေ့ရသည် ။ အမည်က ရိုကျိုး၍ အလုပ်က ကြီး ကျယ်သည်။
အမှန်မူ တက္ကသိုလ်အမည်သည် တိုလေလေ ဘောင်ကျယ်လေလေဖြစ်ပြီး ရှည်လေလေ ဘောင်ကျဉ်းလေလေဖြစ်၏။
ဥပမာ သီရိလင်္ကာက "Buddhist and Pali University" ကို ကြည့်ပါ။ Buddhist University ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးနှင့်ဆိုင်သည်။ Pali ဟု ထည့်လိုက်သဖြင့် သက္ကဋ စသော အခြားဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ ကို ကန့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။
မဟာယာနတို့က ပို၍ ဘောင်ကျယ်သည်၊ Buddhist University ဟု အမည်ပေးလိုက်သည်။ ထေရဝါဒကို ကန့်မထားခဲ့။ ပါဠိကိုလည်း ကန့်မထား ခဲ့။ သင်ကြားပေးနိုင်အောင်လည်း ထေရဝါဒ ပါဠိ ပညာရှင်တို့ကို ခန့်အပ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံက ပရမတ်နှင့် ပညတ်အကြောင်း တော်တော်ပြောကြ၏။ "ဒါတွေက ပညတ်တွေပါ" ဟုလည်း ဆိုမိန့်တတ်ကြ၏။ အမှန်မူ ထိုနိုင်ငံတွင် ပညတ်၏ ကျေးကျွန်တော်တော်များ၏။
"အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ" စသောအမည်များကို နှစ်လို အားရ သုံးစွဲတတ်ကြ၏။ ထို စကားလုံးတို့က ပါဠိစကားနှင့်ဆိုလျှင် ပဒ ပူရဏ (အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ ပုဒ်ပြည့်ရုံ အပိုထည့်စကား ဟူ၏) များသာဖြစ်သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များ သုံးစွဲသည်က တော်သေး၏။ ထို ပဒ ပူရဏပညတ်ပိုးက နိုင် ငံတော်ဆိုင်ရာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကိုပင် ဝင်ကိုက်နေသည် တွေ့ရ၏။
ရန်ကုန်မှာ ရှိစဉ်က မရမ်းကုန်းမှာရှိသော ထို "အင်တာနေရှင်နယ်" ဆိုသည့် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ဒီပလိုမှာတက်နေသော ဂျာမန်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ပြီး စကားစမည်ပြောမိရာ သူမက "ဘနားနား ယူနီ ဗာစီ တီ" မှာ ကျောင်းတက်နေသည်ဟုဆိုသည်။ အကြောင်းကိုမေးတော့ နေ့တိုင်း ထမင်းစားအပြီး ငှက်ပြောသီး တစ်လုံးစီပေးသောကြောင့်ဟူ၏။
မှန်၏။ "ဘနားနား ယူနီဗာစီတီ" ဟုဆိုသဖြင့် သူတို့ (ကျောင်းသားတို့) ကို ပန်းသီးပေးစရာမလိုတော့။ ဘနားနားက ချိပါး (Cheaper) ဖြစ်၏။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 6/13/2013 - No comments
ကမ္ဘာကြီးက လုံးပြီး ဝိုင်းနေတော့
အပြစ်မဲ့သူ တစ်ယောက်ကို မဖမ်းမိပါစေနဲ့"
ပုလိပ်တွေ ရွတ်ဖတ်တဲ့ အစ်သစ်စကား
ဘင်လာဒင် လွတ်ချင် လွတ်ပါစေ
ကွန်မန်ဒိုသွေးတစ်ပေါက် မြေ မသောက်လိုက်ရဘူး။
ဟိုး အရင်ကလို နိုင်ပြီးရော မဟုတ်တော့ဘူး။
ကိုယ့်လူ အသေအပျောက် မရှိဖို့
ကိုယ့်လူ အသေအပျောက် နည်းဖို့
သူ့လူပါ အသေအပျောက် နည်းဖို့
သေသူတွေက အပြစ်မဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတတ်လွန်းလို့။
ဟစ်တလာ စစ်သားငယ်ကိုတောင် မပစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့
"ဝံသာ" တော့ "နု" ကြပါတယ်
ဦးနုခေတ်က "ဝံသာ" နု သလိုတော့မဟုတ်ဘူး
နေရာမမှန်ဘူး အဆိုခံရမှာ စိုးထင်ရဲ့
ကောဓေန ကောဓံ=အမျက်ကို အမျက်ဖြင့်
ဒေါသေန ဒေါသံ= ဒေါသကို ဒေါသဖြင့် (ကိစ္စမပြီး၊ မအောင်မြင်နိုင်ရာ)
ရဟန်းနှင့် ဟန်းဖုန်း (ကျောင်းတွင်းမှတ်စု)
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 6/12/2013 - No comments
မြန်မာ၊ တရုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာများ ကြားမှာ ခေတ်မီ ဟန်းဖုန်းများနှင့် ပတ်သက် ပြီး အသံနှစ်မျိုး ကွဲနေတတ်သည်။
" ဒီဘုန်းဘုန်းက မိုက်တယ်၊ အပ်ပဒိတ်တွေမှ ကိုင်တာ" က မြန်မာအများစုရဲ့ အသံဖြစ်တတ်ပြီး
"သူ့ခေတ်နဲ့သူ သုံးတော့ သုံးရမှာပေါ့၊ ရဟန်းက အဲသလောက်ကြီး ရုပ် ဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ခေတ်မီနေဖို့ လိုအပ်သလား" က တရုတ်အများစုတို့ အသံဖြစ်နေတတ်သည်။
သူတို့မှလည်း မဟုတ်၊ ဘလက်ဘန်း ဆိုသည့် " ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မလက္ကာရေလက်ကြား ယဉ်ကျေးမှု" ကို သုတေသနပြုနေသူ အမေရိကန် ပါမောက္ခတစ်ယောက်က (သူမက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှင့် သုံးစွဲ ပြောဆိုရ မည့် မြန်မာ့ ဝေါဟာရများ တစ်လုံးမှ မလွဲအောင် ၄၅ မိနစ်ခန့် စကားပြော သွားနိုင်သည်) နောက်ဆုံးပေါ် ဟင်းဆက်ဖြင့် စကားပြောနေဟန် (ထိုဟင်း ဆက်ဖြင့် တွဲကာ တမင်ရိုက်ထားဟန်တူသော) ရဟန်းတစ်ပါးဓာတ်ပုံကို ကြည့်ကာ ပြုံးနေလေသည်။
သူမ အပြုံးကို ကိုယ်လည်း ဘာသာမပြန်တတ်။ ထိုစဉ် သူမကိုင်သည့် ဟန်း ဖုန်းကိုကြည့်တော့ နိုကီးယား အဟောင်းလေြး ဖစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ (အချိန်ရမှ ဒီဟန်းဆက်လေးကို အပ်ပဒိတ် လုပ်ရဦးမယ်ဘုရား၊ အသုံးပြုလို့ သိပ်မကောင်းတော့ ဟု သူမက ဆိုသည်)
ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်သည့် နိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာများနှင့် မိမိတို့ နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာ သာများ၏ ရုပ်ဝတ္ထုများအပေါ် မတူညီသော အမြင်ကို လေ့လာရလိုက်မိေ သာ ကျောင်းတွင်းမှတ်စုလေးသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုင်နိုင်၍ (သို့) လှူသူရှိ၍ ကိုင်ဆောင်တော်မူကြသည့် ရဟန်းများကို ဝေဖန် လိုစိတ်၊ ဣဿာယှဉ်စိတ် မရှိပါ။
စထရိတ်တိုင်း သတင်း ကောက်နှုတ်ချက် (မောနင်း ပို့စ်)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, သတင်း - on 6/12/2013 - No comments
ဒီနေ့ စထရိတ်တိုင်းမှာ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းနှစ်ပုဒ်ပဲ ပါတယ်။
၁။ သူရ ဦးရွှေမန်းလည်း သမ္မတဖြစ်ချင်သူစာရင်းထဲ ပါသွားပြီ။
( နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်အကြွေးပြုနိုင်ဖို့ )
၂။ မြန်မာကဝယ်တဲ့ တရုတ်ပြည်လုပ် MA60 လေယာဉ် ပျက်ကျတဲ့ သတင်း
(တကယ်က MA60 က မျက်နှာမလိုက်ပါဘူး၊ ဝယ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပျက် ကျနေတာပါ)
ဒီနေ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်ကို ချုပ်လိုက်တော့......
ဘယ်သူပဲ သမ္မတဖြစ်ချင် ဖြစ်ချင် MA60 လေယာဉ်ကို မဝယ်သင့်ဆိုတာပါပဲ။
မေး။ ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အမှန်ပြောတဲ့အခါ ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်လိုအခါမှာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ သူတို့ချင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် "လူလိမ်" လို့ ပြောတဲ့ အခါ မှာပါ။
in Mr Jam, ဇင်ဝေသော် - on 6/11/2013 - No comments
၁။ မဝယ်အပ်တဲ့ ပစ္စည်း (သူတို့မှာလည်း ရှိတယ်)
အချို့ တံဆိပ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဘာကြောင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့မသင့်ကြောင်း မေးေ တာ့ .....
ဒီပစ္စည်းက အရှမှာ ထုတ်လုပ်တာမှန်ပေမယ့် မူလ ထုတ်လုပ်သူက အမေရိ ကန် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တယ်။
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေက အမေရိကန် အစိုးရနဲ့ တစ်သားတည်းပဲ။
အမေရိကန် အစိုးရက ဂါဇာဒေသမှာ တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း အစ္စရေးဘက်က ကူညီတယ်လို့ သံသယဖြစ်စရာ ရှိတယ်။ အစ္စရေးတွေက ဂါဇာဒေသမှာ ရက်စက်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ကြတယ်။
Because it is the Asian equivalent ofaproduct originally made by an American company and American companies are sort of associated with the American government and the American government is suspected of being pro-Israel and Israel did terrible things in Gaza recently.
၂။ အသားချင်းတော့ မတူပါလေ
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူရှိ ဟော်တယ်တစ်ခုက စက်လှေကားထဲမှာ “halal” လည်လှီးသားပဲ သယ်ယူခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တင်ထားေ ကြာင်း မလေးက စာဖတ်သူ အေမီ ချူ ဆီက ကြားသိရပါတယ်။
လည်လှီးသား မဟုတ်တာတွေ "Non-halal items" ပါလာရင် ရိုးရိုးလှေ ကားနဲ့ တက်ရတယ်။
AN ELEVATOR inaMalaysian hotel hasasign in it saying that can only transport foods which are “halal” (a term which usually refers to animals ritually slaughtered by having their throats cut), I hear from Amy Chew,areader in Kuala Lumpur. Non-halal items must go via the staircase.
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/10/2013 - No comments
တည်းခိုခန်းကို ပြန်ရောက်တော့ ခဏနားနေပြီး တီဗွီ ရီမုတ်ကွန်ထရိုး ကို နှိပ် ရင်း ကိုယ်နားလည်နိုင်မယ့် ဘာသာစကားပြောတဲ့ ဇာတ်ကားကို ရှာနေမိ တယ်။ နှိပ်ရင်း နှိပ်ရင်းနဲ့ အမေရိကန် စစ်ကား တစ်ကားစီ လက်ရောက်သွား မိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဇာတ်ကားက ကောင်းခန်းရောက်နေပါပြီ။ ကွဲပြီးကျန် ရစ်နေခဲ့တဲ့ အမေရိကန် တပ်စိပ်တစ်စိပ်ကို ရန်သူ ရှရှားစစ်သားတွေက ဝိုင်း ထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်း နှင်းခဲတွေဖုံးပြီး ဆွတ်ဆွတ်ဖွေး လျက် ရှိနေတယ်။ အမေရိကန်စစ်သားတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သိပေ မယ့် ဘယ်မှာ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျမသိတော့ ရှရှားစစ်သားေ တွကလည်း အရမ်းမတက်ရဲကြဘူး။
ခဏနေတော့ အဲဒီ တပ်စိပ်ကို ကယ်တင်ဖို့ အမေရိကန် ဟယ်လီကော်ပတာ တစ်စီးထိုးဆင်းလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေပြင်အထိမဆင်းဘဲ တွယ်ပြီးတက်ဖို့ ကြိးချပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ ဟယ်လီကော်ပတာရှိရာ အမေရိကန် စစ်သားေ တွလည်း ပြေးသွားကြတယ်။ ဒီတော့မှ ရှရှားစစ်သားတွေက အမေရိကန်တွေ ကို တွေ့ပြီး နောက်ကနေ လိုက် ဝိုင်းပြီး ပစ်ခတ်ကြတော့တာပါပဲ။ ပြေးရင်း၊ ကာကွယ်ရင်း...... ပြေးနေကြစဉ်မှာ နောက်ဆုံးက ပြေးလိုက်လာတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားလေးရဲ့ပေါင်ကို ကျည်ဆံထိမှန်သွား ရှာပါတော့ တယ် ။ ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ သူလည်းနောက်က ကြိုးစားလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ ခရီးကမတွင်တော့ပါဘူး။
ကျည်ဆံမထိတဲ့စစ်သား ငါးယောက် ဟယ်လီကော်ပတာပေါ် ရောက်သွား တယ်။ ဟယ်လီကော်ပတာ ဆင်းလာတာ တွေ့လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ရန်သူ့ စစ်တပ် ကလည်း တင့်ကားတွေအပါအဝင် အလုံးအရင်းနဲ့ ပြေးတက် လာကြတော့တယ်။
ကျည်ဆံထိမှန် ထားတဲ့ စစ်သားကလည်း မျှော်လင်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ ကြိုးစားပြီလိုက်ရှာတာပါပဲ။ ခန့်မှန်းခြေ ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ ကိုက် တစ် ရာလောက်ပဲ ဝေးမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲသလိုပဲ ရုရှားတင့်ကားတွေနဲ့ကလည်း ကိုက် ငါးရာလောက်ပဲ ဝေးတော့မယ်။ စက္ကန့်ဝက်အတွင်း အားလုံး ပြာဖြစ် သွားနိုင် တဲ့ အနေအထားပေါ့။
ကျန်တဲ့စစ်သားတွေအတွက် ဘေးလွတ်ရာကို သွားမလား။
အဲဒီအချိန်မှာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့ ကပ္ပတိန်ရဲ့ မေးရိုးတွေတင်းမာသွားပြီး ဘယ်သူမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အလုပ်ကို သူ ကောက်လုပ်လိုက်တယ်။
ကပ္ပတိန်က သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ သေနတ်နဲ့ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ စစ်သားလေးရဲ့ ရင်ဝကို တည့်တည့်ကြီး ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။
မယုံကြည်နိုင်တဲ့ မျက်လုံးအစုံနဲ့စစ်သားလေး ခွေကျသေဆုံးသွားပါတော့ တယ်။
ပြီးတော့မှ ကပ္ပတိန်က "Take off !" အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
အမိန့်ပေးအပြီး ကပ္ပတိန်က ငိုချလိုက်တယ်။ ဟယ်လီကော်ပတာကတော့ ရန်သူနှင့်ဝေးရာကို ပြန်သန်းထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဟယ်လီကော်ပတာ စတင်ပျံနေတော့ စစ်သားတစ်ယောက်က ကပ္ပတိန်ကို ခုံအုပ်လိုက်ပြီး လက်သီးနဲ့ ကျကျနနထိုးတယ်။ ကပ္ပတိန်ကတော့ ဘာမှ လည်း ပြန်မပြော။ ခုလည်း မခုခံ။ အဲ့ဒီ စစ်သား ထိုးသမျှကို ငုံ့ခံနေရှာတယ်။
“ ခင်ဗျား ရဲဘော်စိတ်မရှိဘူး “ စစ်သားက ကပ္ပတိန်ကို စွပ်စွဲတယ်။
“ ငါ့မှာ ခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိတယ်။ သူ့ကို ကယ်ဖို့ကြိုးစားရင် တို့ခြောက်ေ ယာက်လုံးသေမယ်။ သူ့ ကို မကယ်တော့ စစ်သား ခြောက်ယောက် ရဲ့ အသက် ငါတို့ပြန်ရတယ်။ တစ်ယောက်ပဲဆုံးတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ရင် ငါတို့ ဟယ်လီကော်ပတာပါ ပစ်ချတာ ခံရတော့မယ်“
ကပ္ပတိန်က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲ ဖြေတယ်။
“ ဒါဖြင့် ကိုယ့်ရဲဘော်ကို ဘာလို့ ပစ်သတ်ရတာလည်း၊ ခင်ဗျား လူယုတ် မာကြီး “ စွပ်စွဲပြန်တယ်။
“ ဒါက ပရင်စီပယ်အရ ဖြစ်တယ်။ ဒီကောင်တွေလက်ထဲ ရောက်ပြီး ငါတို့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖွင့်မပြောဘူးဆိုရင် ဘယ်သူမှ အသက်မရှင်နိုင် ဘူး။ သေရတာချင်းအတူတူ အနှိပ်စက်မခံရဘဲ သေရတာက ပိုကောင်းတယ် “ ဖြေတယ်။
စကားဆုံးတော့ ကပ္ပတိန်ကို လက်သီးနှင့်ထိုးတဲ့ စစ်သားလည်းငိုပြန်တယ်။
ငိုသင့်တယ်။ စစ်သားလည်း ငိုသင့်တယ်။ ကပ္ပတိန်လည်းငိုသင့်ပါတယ်။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားများ မငိုသင့်ဆိုတဲ့ စကားဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိလှပါဘူး။ သူတို့ မျက်ရည်တွေမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြည့် နှက်လို့နေတယ်။
အဲဒီ မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရင်းတုန်လှုပ်သွားမိတယ်။
ကပ္ပတိန်ဟာ ပြတ်သားတယ်။ လူသားဆန်တယ်။ ခေါင်းဆောင်ဆန်တယ်။
သူ မှန်သလား၊ မှားသလား ပြောချင်ရာပြောခွင့်ရှိနေတယ်။ နှစ်ခုစလုံး မှန်ပြီး နှစ်ခုစလုံးလည်းမှားနိုင်တာပါပဲ။
အဲဒီနောက် တီဗွီ ဖန်သားပြင်က ခွာပြီး မျက်လုံးကို စုံမှိတ်လိုက်မိ ပါတော့ တယ်။
ရဲဘော် ခြောက်ယောက်ရဲ့ အသက်..
ပေါင်မှာ ဒဏ်ရာနဲ့ အချိန်မီ ရောက်မလာနိုင်တဲ့ သနားစရာ စစ်သား..
တခါ တခါ ကျနော်တို့ ဘဝတွေမှာ ရွေးစရာ များများ မရှိတတ်ဘူး။
ခင်ဗျား အဲဒီ ကပ္ပတိန်နေရာမှာဆို ဘာလုပ်မလဲ???
ကျနော်ကတော့ အချစ်များစွာနဲ့ ကျည်ဆန်သုံးတောင့်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
အဲဒီ ကျည်ဆံသုံးတောင့်မှာ ရက်စက်မှုတွေ၊ ကောက်ကျစ်မှုတွေ၊ လူမဆန် မှုတွေ ပေကျံနေတယ်လို့ မခံစားရဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 6/10/2013 - No comments
...the lack of electricity,
.....overwhelmed government officials and
..........eager but very under-educated workforce.
in ဇင်ဝေသော် - on 6/09/2013 - No comments
တရုတ်ပြည်၊ Guangzhou ပြည်နယ်က ဘဏ်မှာဓားပြတိုက်တော့ ဓားပြေ တွက
" မလှုပ်ကြနဲ့၊ ဘဏ်ငွေတွေက အစိုးရငွေ၊ အသက်က ခင်ဗျားတို့ အသက် " ပြောတယ်။ လူတွေအားလုံး တစ်ယောက်မှ မလှုပ်ကြဘူး။
ဒါကို "Mind Changing Concept” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်ကို လှည့်စားလိုက် တဲ့ ချဉ်းကပ်နည်းပေါ့။
ဒီအထဲမှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး မရှိလှဘူး။ ဒါနဲ့ ဓားပြက
" ကျေးဇူးပြုပြီး မြို့ကြီးသူ ပီသပါ။ အခုဟာက ဓားပြတိုက်နေတာပါ၊ မုဒိမ်း ကျင့်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး"
ဒါကိုတော့ "Being Professional” ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲ အာရုံ စိုက်ထားပါတယ်။
ဓားပြတွေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဓားပြအငယ်လူ (MBA-trained) က ဓားပြအကြီး (who has only completed Year6in primary school) ကို
" အကို ကျနော်တို့ ပိုက်ဆံတွေ ရေကြည့်ရအောင်" လို့ ပြောတော့ ဓားပြ အကြီးက
"မင်းနှယ် ရူးပါ့ကွာ၊ ဒါတွေရေနေလို့ အချိန်တွေအများကြီး ကုန်မှာပေါ့၊ ဒီည တီဗွီသတင်းကို ထိုင်ကြည့်လိုက်၊ တို့ ဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲဆိုတာ သိ တယ်"
ဒါကိုတော့ "Experience.” လို့ခေါ်တယ်။
ဒီခေတ်မှာ အတွေ့အကြုံက အောင်လက်မှတ်တွေထက် ပို အရေးကြီးတယ်။
ဓားပြတွေ ထွက်သွားတော့ ဘဏ် မန်နေဂျာက ရဲကို အကြောင်းကြားဖို့ စူပါ ဗိုက်ဆာကို လှမ်းခိုင်းတယ်။ ဒီတော့ စူပါဗိုက်ဆာက
"နေပါဦး၊ ကျနော်တို့အတွက် ၁၀ မီလီယံ ယူထားလိုက်ပြီး ၇၀ မီလီယံ ထပ် တိုးလိုက်မယ်" အကြံပြုတယ်။
ဒါကိုတော့ "Swim with the tide.” ခေါ်တယ်။ ခေတ်ပျက်စဉ် ကိုယ့် အတွက်ရအောင် လုပ်ယူတာ။
နောက်နေ့ TV new မှာ ဘဏ်ကနေ မီလီယံ ၁၀၀ ဓားပြ တိုက်သွားတဲ့ အကြောင်း ကြေငြာတယ်။ ဓားပြတွေကတော့ မကျေနပ်တိုင်း ထပ်ရေ၊ မီလီယံ ၂၀ ပဲ ရှိတာတွေ့ရတယ်။ဓားပြတွေခံလိုက်ရတော့ ဒေါသဖြစ်မဆုံးပေါ့။
"ငါတို့က အသက်နဲ့ရင်းပြီး ဓားပြတိုက်၊ မီလီယံ ၂၀ ပဲ ရတယ်။ ဘဏ် မန်နေ ဂျာဆိုတဲ့ကောင်က လက်ဖျောက်လေးတီးပြီး မီလီယံ ၈၀ ရသွားပြီ၊ ဒါ ကြည့် ရင် ဓားပြဖြစ်ရတာထက် ပညာတတ်ဖြစ်ရတာ ပိုမိုက်နေသလိုပဲ"
ဒါကိုတော့ "Knowledge is worth as much as gold!" လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဘဏ် မန်နေဂျာကတော့ ပျော်ရွှင်မဆုံး တပြုံးပြုံးပေါ့။ သူရှုံးခဲ့တဲ့ မားကက် ရှယ်ယာတွေ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုနဲ့ ထေမိသွားတယ်။
ဒါကိုတော့ "Seizing the opportunity.” လို့ခေါ်ပြီး အရဲစွန့်ရဲခြင်းလို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
ကဲ..ဒါဆို ဒီအမှုမှာ ဘယ်သူ ဓားပြအစစ်လဲ။
(ဒီနေ့ ရတဲ့ အီးမေးကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ)
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/09/2013 - No comments
သမီး မေမေတို့ကို မျက်နှာမပြရဲလို့ အိမ်က ထွက်သွာခဲ့ပါတယ်။ သမီးချစ်သူ နဲ့ သမီးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ မေမေတို့ သဘောတူနိုင်မယ် မထင်လို့ပါ။ သူ့ကို သမီး သိပ်ချစ်ပါတယ်။ သူက သမီးနဲ့အရွယ်တူ၊ ဆေးစွဲနေသူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကို ချစ်လွန်းလို့ ခွင့်လွှတ်ထားရာကနေ သမီးတောင် အခု ဆေးနည်းနည်း ကြိုက်စပြုလာပါပြီ။ ဆေး ဆိုတာ လူတွေပြောသလောက် ဆိုးရွားတဲ့ အရာ ကြီး မဟုတ်ပါဘူး မေမေ။
သမီးအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ အခု သမီးအသက် ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သမီးဘဝကို သမီး ထိမ်းကြောင်းနိုင်ပါပြီ။ သမီးချစ်သူအတွက်လည်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သူဘာမှ မဖြစ်ခင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက AIDS ရောဂါကို ကုသနိုင်တဲ့ ဆေး ရှာဖွေနိုင် မယ်လို့ သမီးတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အခု သမီးမှာ ကိုယ်ဝန်ပါရှိနေတော့ သူက ဆေးလျှော့သုံးမယ်လို့ သမီးကို ကတိပေးထားပါတယ်။
ဖေဖေနဲ့ မေမေ့ကို သမီး ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်။
စာကြွင်း။ လူ့ဘဝဆိုတာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေထက် ဆိုးမယ်ဆိုရင် အများကြီး ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတာ မေမေ့ကို အသိပေးရုံပါ။ အခု သမီး သန္တာနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ အထက်မှာ သမီးရေးထားတာတွေ မမှန်ပါဘူး၊ တကယ်က သမီး ၁၀ တန်း စာမေးပွဲ ကျရုံတင်ပါ။ ဒါဆို မေမေ စိတ်ချမ်း သာနိုင်ပြီလို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ကွန်စစ်စတင့် ဖြစ်သူများ (New Addition)
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 6/08/2013 - No comments
မေး ။ ။ တော်လှန်ရေးသမား စစ်စစ်တွေဟာ ဘယ်လိုလူတွေပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရုရှား စာရေးဆရာကြီး တစ်ယောက် ပြောဖူးပါတယ်။ တော် လှန်ေ ရးသမား စစ်စစ်တွေဟာ ပထမ နိုင်ငံခြားသားတွေကို တော်လှန်ပါ တယ် ။ တော်လှန်ဖို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အချင်းချင်း အုပ်စုခွဲပြီး ဆက်လက် တော်လှန်ကြပါတယ် တဲ့ ။ ကွန်စစ်စတင့် ဖြစ်လို့ ချီးကျူး စရာပါ။
မေး ။ ။ အနောက်က အမျိုးသားတွေ နဲ့ အာရှ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျတာ များပြီး အနောက်က အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ အာရှ အမျိုး သားတွေ အိမ်ထောင်ကျတာ တော်တော်နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ လို့ မေးတဲ့ အခါမှာ အာရှ အမျိုးသမီးတွေက ရင့်ကျက်တယ်၊ ( Girl ) ဂါးလ် ကနေ (Lady ) လေဒီ ဖြစ်လာကြတယ်၊ အာရှ အမျိုးသားတွေကတော့ အသက်ကြီးလာပေမယ့် ( Man ) မဲန်း ဖြစ်မလာဘဲ ( Big boys ) ဘစ် ဘွိုင်းပဲ ဖြစ်နေကြလို့ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဘာမှ မပြောချင်ပါဘူး။ အာရှ အမျိုးသားတွေက အာရှ အမျိုး သမီးတွေထက် ပိုပြီး ကွန်စစ်စတင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကတောင် သိနေ မှပဲ။
မေး။ ။ ဘီရူးမာ (ဘူးရ်မား) လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ တုံးက ငါတို့ လာစဉ် ကလည်း ဒီခြုံပုတ်က ဒီအတိုင်း၊ ဒီတောင်ကုန်းလေးကလည်း ဒီအတိုင်း၊ လူတွေကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ ဘာမှလည်း မပြောင်းပါလား။
ဖြေ။ ။ မစ္စတာဂျပန်။ ခင်များ အဲသလို မပြောပါနဲ့။ ဟိုတုံးက စစ်အာဏာ ရှင်လက်ထက်မို့ တစ်ပါတီထဲကိုပဲ ဆဲလို့ရတယ်။ အခု ဒီမိုကရေစီရတော့ အနည်းဆုံး နှစ်ပါတီကို စိတ်ကြိုက်ထိုင်ဆဲလို့ရတယ်။ ဆင်ဆာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ယဉ်ကျေးတဲ့ စကားလုံး ဘာညာတွေအတွက် လည်း ခေါင်းရှုပ်ခံ စဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ဆဲရေးဆိုခွင့် ပါ အပြည့်ရနေပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကွန်စစ်စတင့်တော့ ဖြစ်တယ်။ ဒါလည်း ဂုဏ်ယူစရာပဲ မဟုတ် လား။
in ဇင်ဝေသော်, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/07/2013 - No comments
ကံကောင်းတဲ့လူဆိုတာ ရေထဲတွန်းချလိုက်ရင်တောင် ငါးကို ကိုက်ပြီးပြန် တက်လာတယ်။ (အမည်မသိ)
ကံဆိုးတဲ့လူ (ကျနော်) သုဿာန်ကန်ထရိုက်ဆွဲလိုက်ရင် လူတွေမသေ ကြတော့ဘူး။(အမည်ရှိ၊မမှတ်မိ)
ဒီပုံပြင်နှစ်ပုဒ်ရဲ့ မော်ရယ်: ကံကောင်းသူကို သုဿာန်ကန်ထရိုက်မဆွဲစေနဲ့။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/07/2013 - No comments
ကဆုန်လပြည့် (Wesak Day) ရောက်တိုင်း မေးတတ်ကြ သည့် မေးခွန်း က မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီလိုပဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကျင်းပကြသလား ဆို သည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။
"Yes." ဟုဆိုက အလွယ်တကူ ပြီးနိုင်သော်လည်း အဖြေက အနည်းငယ် လိုနေသလိုပင်။ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာများကြား၌ ဤနေ့ (ကဆုန်လပြည့်) က အထူးခြားဆုံး အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ဝါဆိုလပြည့်က တကယ့်ကို သာမန် သာဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်မှာ ကဆုန်လပြည့်နှင့် ဝါဆိုလပြည့်က သူမသာ ကိုယ်မသာဖြစ်သည်။ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဩဝါဒ မချွေခင်က ဝါဆို လပြည့်ကပင် ပို၍စည်ကားသယောင် ထင်မိသည်။
(ညောင်ရေ သွန်းရင်း ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘာဝါ စသော ဥဒါန်း ဂါထာတော် များ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အနု၊ ပဋိလုံများ ရွတ်ဖတ်ကြလျှင် ပို၍ အကျိုးများဖွယ် ရှိသည်၊ ညောင်ရေ သွန်းခြင်းက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သက်သက်သာဖြစ်၍ အဖျားကျပြီး ဥဒါန်းဂါထာတော်များက ဗုဒ္ဓနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သဖြင့် အရင်းကျသည်)
ထိုအခါ ကဆုန်လပြည့်နှင့် ဝါဆိုလပြည့်ကို ဘာကြောင့် တန်းတူထားရတာ လဲ (စည်ကားစွာ ကျင်းပတာချင်း တူရတာလဲ) ဟူသော မေးခွန်းလည်း တက်လာတတ်သည်။
ကိုယ့် ဉာဏ်မီသလောက်ကြည့်မိတော့ ယဉ်ကျေးမှုကို အဓိက တွေ့ရသည်။ ရဟန်းတော်အရေအတွက် အခြားနိုင်ငံတွေထက် ပိုများနေခြင်းကြောင့် အရှင်တို့ ဝါဆိုရာနေ့၌ တစ်နွယ်ငင် တစ်စဉ်ပါ ဝါဆိုလပြည်မှာ ကျောင်းကန် ဘုရားတွေမှာ စည်ကားတာ ဖြစ်တန်ရာ၏ ယူဆမိသည်။
ထိုအခါ ဓမ္မစကြာတရားဟောတာ၊ ဝါဆိုဝါကပ်တာလည်း အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါပေသည့် ဘုရားအလောင်း ဖွားမြင်တာ၊ ပရိနိဗ္မာန်စံဝင်တာ၊ အထူးသဖြင့် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ရှိတာလောက်တော့ အရေးမကြီး ဆိုသည့် မေးခွန်းလည်း ရှိလာတတ်ပြန်သည်။
ဤမေးခွန်းကိုတော့ ခေတ်စကားနဲ့ပဲ ရယ်စရာလို ဖြေမိသည်။ ကဆုန်လပြည့်မှာ ဘုရားဖြစ်တာပဲ ရှိသေးသည်၊ သတ္တလောက အတွက် ဘာမှ မလုပ်ရသေး၊ ရာထူး ခန့်အပ်၊ လက်ခံ သည့်သဘောသာရှိသည် ။ အော်ဖစ် ရှယ်လီ တကယ် အလုပ်စတာကတော့ ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှသာဖြစ် သည်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ ဒီနှစ်ရက်ဟာ တန်းတူ အရေး ကြီးကြသည်ဟု ရယ်စရာလိုလို ဆိုမိသည်။
နောင်နှစ် ကဆုန်လတွေ ရောက်လျင်လည်း အခြား အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တွေ က မေးကြဦးမှာ သေချာပါသည်။ သင်ကော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
အကြံဉာဏ်ကောင်းများ ရလျှင် လိုချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါသည်။
နည်းပညာ အကြံပေး အရာရှိ ရှင့်
in The World Joke, ဇင်ဝေသော် - on 6/06/2013
ကျမလေ မနှစ်ကပဲ Boyfriend 0.5 ပရိုဂရမ်ကို အပ်ပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ အနေနဲ့ Husband 1.0 ကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
အပ်ပ်ဒိတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အချိန်က စပြီး ပြဿနာ စ တက်တော့တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် Romance 9.5 ဆိုရင် အလုပ် မလုပ်တော့သလောက်ပဲ။
Personal Attention 6.5 ဆိုရင် အခြား ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ ရောထွေးနေပြီး ဘာမှ ချောချောမွေ့မွေ့ မရှိတော့ပါဘူး။
သူ့အစား ဝင်လာတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကက NFL. EPL. CL စတာတွေ ဖြစ်နေ ပါတယ်။
နောက်ပြီး Boyfriend 0.5 တုန်းက မရှိခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ စိတ်ပျက်ေ လာက်အောင် ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
Flowers နဲ့ Jewellery ပရိုဂရမ်တွေ အလိုလို ပျောက်သွားပါတယ်။ အရင်က ကောင်းခဲ့တဲ့ Conservation 8.0 ဆိုလည်း မရန်း တော့ဘူး။
ကျမ အင်စတောလုပ်ထားပေမဲ့ Housecleaning 2.6 က အက်တီဗိတ် မဖြစ်ဘူး။
အကူအညီဖြစ်မလားဆိုပြီး Nagging 5.3 ကို ထပ်တလဲလဲ အင်စတောပေမဲ့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးရှင်။
ကျမ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု လမ်းညွှန်ပေးပါလား ရှင့်။
သောကသည် ဇနီး ခင်ဗျား
ဒါတွေက ဖြစ်တတ်တဲ့ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေဆိုတာတော့ အမှတ်ရပေးပါ။ Boyfriend 0.5 က အင်တာတိန်းနင်း ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး Husband 1.0 က အော်ပရိတ်တင်း စစ်စတန်ပါ။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းလို့ ပြောပါရစေ။
တကယ်တော့ Husband 1.0 က အကောင်းစား ပရိုဂရမ်တစ်ခုပါ။ အရင်ဆုံး ကွန်မင့် C:/ ကို ရိုက်ပြီး ITHOUGHTYOULOVEME လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါပြီးရင် Tears6နဲ့ Guilt 3.0 ပရိုဂရမ်နှစ်ခု အော် တိုမက်တစ် အင်စတော လုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ခု အင်စတောပြီးရင် အမကြုံတွေ့နေရတဲ့ Jewellery 2.0 နဲ့ Flowers 3.5 ပရိုဂရမ်နှစ်ခုလည်း အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ သတိပေးချင်တာကတော့ Jewellery 2.0 ကို အိုဗာဖြစ်အောင် မရန်း မိပါစေနဲ့။ ဒါက Husband 1.0 ကို အကြီးအကျယ်ပင်ပမ်းစေပြီး Grumpy Silence 6.1 ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဆီးရီးယပ်စ် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒီ Husband 1.0 အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတာတွေကတော့ Happy Hour 7.0 ပရိုဂရမ်နဲ့ Beer 6.1 ပရိုဂရမ် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Beer 6.1 ရန်းတာ များပြန်ရင် Snoring Loudly 10.8 ဖြစ်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ အသံတွေ ထွက်လာနိုင်ပြန်ပါတယ်။
Ho Lu Gyi 0.11 ရယ် Eing Ga Lugyi 2.2. ရယ် Thay Nar Gyi 3.1 ရယ် စတဲ့ အလကားရတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ သူ့ဘာသာဝင်လာရင် ချက်ချင်း Uninstall လုပ်ပစ်ပါ။
အရေးတကြီးသတိပေးချင်တာကတော့ Husband 1.0 ကောင်းကောင်း မရန်းလို့ဆိုပြီး Mother-in-law 1.0 ကို အင်စတောတာ မလုပ်လိုက်မိ ပါစေနဲ့။
ဒီထက်ပိုဆိုးတာက New Boyfriend Program 0.6 ပါ။ လုံးဝရှောင်ပါ။
တစ်ခုသတိထားရမှာက Boyfriend 0.5 ပရိုဂရမ်ကနေ Husband 1.0 ကို ပြောင်းလိုက်ရင် မှတ်နိုင်တဲ့ မီမိုရီအား အလိုအလို အများကြီး ကျသွားတတ်ပါတယ်။
အမအနေနဲ့ Sweet and Short Conversation 8.5 ရယ် Make-Up 8.6 ရယ် Self-cooked Food 8.7 ရယ်ကို ထပ်ပြီး အင်စတောထားနိုင်မယ်ဆိုရင် Husband 1.0 ရဲ့ ရန်းအား အများကြီး တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ
နည်းပညာ အကြံပေး အရာရှိ
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 6/05/2013
ဝင်း ဝင်း စီကျူယေးရှင်းဆိုတာ
လူတိုင်းကို 'ဟိုင်း၊ ဟယ်လို' မလုပ်တတ်ဘူး။
တစ်ညလုံး ထုပ်ပိုးနေတဲ့ ရနံ့တွေ
ကြယ် လ သဘင်ကိုတောင် ရင်မခုန်နိုင်ခဲ့ဘူး
မြို့ဦး တုန်းမောင်းမထိုးခင် အရောက်သွားဖို့ တဲ့။
ကျွံနေတဲ့ ဖဝါး စကြွရာက စတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 6/05/2013 - No comments
ကျမမေမေက မွေးချင်းများတော့ ကျမမှာ အဒေါ်တွေအများကြီးရှိတယ်။
မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်လို့ သူတို့နဲ့များ အတူတူသွားရရင် ကျမလက်မောင်းကို လှုပ်လှုပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် နင့်အလှည့်လို့ အမြဲပဲ ပြောတတ်ကြတယ်။
သဘော မတွေ့လှပေမဲ့ အဒေါ်တွေဆိုတော့ အပြုံးလေးနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်ရ တာပေါ့။ ကျမအသက်က ၂၇ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါနဲ့ ဈာပနပွဲတွေ သွားရတဲ့ အခါတွေမှာ ဘာမှမပြောဘဲ သူတို့ လက်မောင်းတွေကို အပြုံးနဲ့ လှုပ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီနောက် ကျမကို ဘာမှ မပြောကြတော့ဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ - on 6/03/2013
အင်္ဂလိပ်စာမှာ Dirty ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ထွက်တာ တော်တော်နည်းပါတယ်။ Dirty hand၊ Dirty money စ သဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား Dirty job ဆိုတာကတော့ ချစ်စရာ ၊ လေးစားစရာ အဓိပ္ပါယ်ရှိနေတယ်။ သူများတကာ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေ ကို Dirty job လို့ခေါ်တယ်။ ဒါတွေကို မဖြစ်လို့ အနစ်နာခံပြီး လုပ်နေရ သူေ တွကို Dirty job လုပ်နေရသူတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှာဆို လူမကြိုက်တဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ပေးရတာ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို အလုပ်ဖြုတ်ရတာ စတာတွေဟာ အများအားဖြင့် မျက်နှာပူစရာ၊ သိက္ခာကျ စရာတွေ ရှိတတ်တော့ လူတိုင်း လက်ရှောင်လိုကြပါတယ်။ မဖြစ်မှသာ လုပ်ကြရတာမျိုးတွေပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်ယောက်ကို လွှဲပေးလိုက် တတ်ကြတာပါ။
ဘောလုံးအားကစားမှာလည်း အဲသလို Dirty job လုပ်ရသူတွေရှိတယ်။ သူတို့က အလယ်တန်း ခံစစ်သမားတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ကဆို ချယ်ဆီးက မိုက်ကယ် လီလီ၊ အာဆင်နယ်က ပက်ထရစ် ဗီယာရာ၊ မန်ယူက ရှိုင်ကိန်းတို့ဟာ စံပြတွေပါပဲ။ ရော်နယ်ဒိုတို့ ဆံပင်ပုံစံ မပျက်ခင် ရှိုင်ကိန်းရဲ့ ဘောင်းဘီ၊ အင်္ကျီတွေကတော့ ရွှံ့တွေ နဲ့ ပေပွနေတတ်တယ်။ အသင်းအတွက် အနစ်နာခံပြီး ဖျက်နေရတော့ အဝါတွေ၊ အနီတွေ ထိတာကလည်း မကြာခဏပဲပေါ့။ တကယ်တမ်း နာမည်တွေကို ယူသွားတာက ရော်နယ်ဒိုတို့လို ဂိုးသွင်းသူတွေဖြစ်နေ တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသင်းရဲ့ ကျောရိုးကိုသိတဲ့ နည်းပြတွေကတော့ တိုက်စစ်မှူးကို ရောင်းချင်ရောင်းမယ်၊ ကျောရိုးကြီးတွေကို ရောင်းဖို့ ပို လက်တွန့်တတ်ကြတယ်။
မှတ်မိသေးတယ်။ ဘောလုံးလွတ်ထွက်သွားတာက ရော်နယ်ဒိုခြေထောက်ထဲက၊ ရော်နယ်ဒိုက ဒါကို လိုက်ဆယ်ကြည့်တယ်၊ မမီဘူးဆိုတော့ ခါး လက်ထောက်ပြီး ရပ်ကြည့်နေလိုက်တော့တယ်။ သူ့ကြောင့် ပျက်တဲ့ဘောလုံးကို အနာခံပြီး လိုက်ဆယ်ရတာက ရှိုင်ကိန်းတို့ပေါ့။ ဒါက သူ့တာဝန်လို ဖြစ်နေတာကိုး။
အဲသလိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ ဘဝတွေထဲမှာလည်း တချို့လူတွေကြောင့် ပျက် သွားတဲ့ ဘောလုံးကို တချို့လူတွေက အနာခံပြီး လိုက်ဆယ်ရတာတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ မှာ အဝါ အနီ အဆို အဆဲတွေလည်း ထိတတ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လူတိုင်းဟာ ရော်နယ်ဒိုလို ဆံပင်ပုံစံ မပျက် ကြွကြွလေး ကစားချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရော်နယ်ဒို ၁၁ ယောက်နဲ့ ဘောလုံးအသင်း တည်ဆောက်လို့မှ မရတာပဲ။
Dirty job လုပ်နေရသူတွေဟာ အသင်း (အဖွဲ့အစည်း) အတွက် ဖြူစင် စွန့်လွှတ်ရဲသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ နှလုံးသားသေးရင် လုပ်လို့မရဘူး။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုတိုးကြီးရဲ့ ခွန်အားဖြည့် မိငယ် သီချင်း အလိုလို ပါးစပ်ထဲရောက်လာတယ်
"အများအကျိုးအတွက် တာဝန်ထမ်းရွက်တဲ့အခါ တကယ် ကိုယ်ကျိုး စွန့်နိုင်မှ"
ဘုရား ပန်းအိုး ရေ
in စာတိုပေစ, သီဟနာဒ - on 6/02/2013
မြန်မာများ ဘုရားပန်းတင်သော ပန်းအိုးနှင့် တရုတ်များ ဘုရားပန်းတင်သော ပန်းအိုးများကို လေ့လာကြည့်ရာ မြန်မာတို့က ပန်းအိုးထဲကို ရေပြည့်လုခမန်း ထည့်တတ့်ပြီး တရုတ်တို့က ရေကို လက်နှစ်လုံးစာလောက်သာ ထည့်ထား တတ်ကြသည်။
တစ်ရက် နှစ်ရက်ခန့်ကြာလောအခါ ဘုရားပန်းအိုး ရေကိုလဲကြသည်။ ရေ လဲ သည့်အခါ တရုတ်တို့က ရေကြောင့် ဆွေးရိနေသော ပန်းရိုးတို့ကို ဖြတ်ပစ်ပြီး ထိုပန်း လန်းသေးလျှင် ပြန်တင်ကြသည်။ သို့သော် မြန်မာတို့တင်သော ပန်း အိုးတို့ကိုကား ထိုနည်းအတိုင်း ကျင့်သုံးဖို့ အခက်ကြုံတတ်သည်။ အကြောင်း က ရေအပြည့်ထည့်လိုက်သဖြင့် ပန်း အရိုးအားလုံး ရေကြောင့် ဆွေးရိနေ ပြီး ဖြစ်နေတတ်သောကြောင့်ပင်။
အဘယ့်ကြောင့် ဘုရား ပန်းအိုး ရေများ ပုတ်စော်နံရသနည်း ဆိုလျှင် လည်း ရေကြောင့် မဟုတ် ပန်းရိုးကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာ လေ့လာမှတ်သားမိသည့် ကျောင်းတွင်း ဒိုင်ယာရီမျှသာ ဖြစ် သည်။
Labels: စာတိုပေစ, သီဟနာဒ
တရုတ် (သို့) ဘာတွေပျက်ပျက် ကြေးနီထွက်ရင် တူးသူ
in ဇင်ဝေသော်, သတင်း - on 6/01/2013
အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုတာ ဘီစိ(၁) ရာစုကအစပျိုးခဲ့ပြီး အေဒီ (၁၀ ) ရာ စုလောက်အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာစည်ပင်ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ ယူဆလို့ ရတဲ့ နေ ရာပါ။ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု၊ ကုန်သွယ်မှုတွေ ရှိခဲ့တာကိုလည်း "the Silk Road" သမိုင်းက သက်သေခံနေတယ်။
တရုတ်နဲ့ ဆက်စပ်လို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ (သို့) မြန်မာပြည်က လက်ပံေ တာင်းအပြီး ကံဆိုးရရှာတာကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်က မီးအီနက် (Mes Aynak) ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓမြို့တော်ကြီး (Ancient Buddhist city on the route of the Silk Road in Afghanistan) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီစိ(၁) ရာစုကနေ အေဒီ (၁၀ ) ရာစုလောက်ထိစည်ပင်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ မီးအီနက် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓမြို့တော်ကြီးရာကြီးရဲ့အောက်မှာ ပမာဏ ကြီးမား လှတဲ့ ကြေးနီသိုက်ကြီးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒီ ကြေးနီသိုက်ကြီးကို တူးဖော်လိုက်ရင် ရရှိလာမဲ့အကျိုးအမြတ်က လက်ရှိ အာဖဂန်တနိုင်ငံလုံး လည်ပတ်နေတဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေပမာဏရဲ့ ငါးဆဖြစ်ပါတယ် တဲ့။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ အမေရိကန်-တရုတ်တို့က ပဏာမလေ့လာတိုင်းတာမှု လုပ် ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်ငွေဒေါ်လာ (၁ )ဘီလျံကိုထုတ်ချေးလိုက်ကြပြီး တရုတ်က တူးဖော်ရေးကန်ထရိုက်ရလိုက်ပါတယ်။
အခြားနိုင်ငံတကာ မိုင်းကုမ္ပဏီတွေက ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးကိုဖြိုဖျက်မှ ရမည့်အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေရလို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေကြချိန်မှာတရုတ် ကတော့ (ဘာဖြစ်ဖြစ် သဘောနဲ့) လက်ရဲဇက်ရဲကန်ထရိုက်ဝင်ဆွဲသွားတာ ပါ။ အခုတော့ တရုတ်ရဲ့ကြးနီးတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်ဟာ မြန်မာပြည်က လက်ပံတောင်းအရေးလို နိုင်ငံတကာ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေ အများကြီးစိုးရိမ်သောကရောက်ရတဲ့ အရေးကိစ္စတခုဖြစ်နေပါတယ်။
သမိုင်း၊ ပထဝီနိုင်ငံရေး၊ ရှေးဟောင်သုနေသန နဲ့ သဘာဝ ဝန်းကျင်ကို လေး စားသူတွေ အမြင်မှာတော့ တရုတ်ဟာ ကြေးနီသာရရင် အဘနှဖူးလည်း သိုက် တူးမယ့်သဘော ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
မူရင်း: William Dalrymple The Guardian, Friday 31 May 2013 22.00 BST
အမျိုးသားဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အားသာချက် (၁၀) ချက်
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 6/01/2013
၁။ တရားဝင် ဘုရားဆုပန်ခွင့်ရှိတယ်။
၂ စက်ပြင်၊ ကားပြင်ဆရာက သင့်ကိုပဲ အမှန်ပြောတယ်။
၃။ မေးမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး မရိပ်ဘဲထားလည်း ဘာမှမဖြစ်။
၄။ ဧည့်ခံပွဲ တစ်ပွဲပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ဖိတ်ဖို့ မေ့နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် သူနဲ့ (သူမနဲ့) သင် မိတ်ဆွေ ဆက်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ ( ဒါကတော့ ဟဲဟဲ)
၅။ ကမ္ဘာမှာ သေးပေါက်စရာ နေရာတွေ ပိုများတယ်။
၆။ လုပ်ရတဲ့အလုပ်က အတူတူ လစာပိုရတတ်တယ်။
၇။ အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့ အရောင် ငါးမျိုးသိရင် လုံလောက်တယ်။
၇။ အသိအိမ် အလည်သွားလို့ လက်ဆောင်မပါလည်း လူတွေက ခွင့်လွှတ် တယ်။
၈။ ပါးရေ နားရေတွန့်တာကရင့်ကျက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းတောင် ပေးသေးတယ်။
၉။ အသက်တူရင်တောင် အပျိုကြီးဖြစ်တာထက် လူပျိုကြီးဖြစ်တာက ၁၅ နှစ်နောက်ကျတယ်။
၁၀။ နည်းနည်းလေး ကြင်နာပြရင်တောင်( ဖြစ်ခဲလို့ ) အများကြီး ခရက်ဒစ် ပိုရတယ်။
ကဲ ဒါပါပဲ။ ကျန်သေးရင် ဖြည့်လို့ရ။ ဂွတ် ဝိကင့်စ်။
အာရှခေါင်းဆောင်ကြီးများ Facebook နဲ့ Facebook ဖြစ်...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဘာသာရေး နားလည်သည်းခံမှုသည် ...
"စားဘုန်း" နှင့် အရွယ်ယ်ကပေးသည့် သင်္ခန်းစာ(ကျောင်းတ...